"ဒေတာသည်လိင်ကိုစွဲလမ်းစေသည့်အရာအဖြစ်မပံ့ပိုးပါ" ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (Prause et al ။ , 2017) - Your Brain On Porn
လေ့လာခြင်း (Prause et al ။ , 2017) "ဒေတာများကိုစွဲလမ်းအဖြစ်လိင်ကိုထောကျပံ့ဘူး"
နီကိုးလ် Prause လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (လာမည့်“ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာပြdisနာများ”) ၏တည်ရှိမှုကို“ ပြိုကွဲစေခြင်း” အဖြစ်အယ်ဒီတာအားသူမ၏နောက်ထပ်စာတစ်စောင်ကိုမိတ်ဆက်ပြသခဲ့သည်။ ICD-11) ။ သို့သျောလညျးအဲဒါမဟုတ်ပါဘူး။ ဤ 240-စကားလုံးထင်မြင်ချက်အပိုင်းအစ (Prause et al ။, 2017) ၎င်း၏တောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့ဖို့သုညလေ့လာမှုများကိုးကား pတစ်ခုတည်းသော၊ အလွယ်တကူချေပနိုင်သည့်ဝါကျတစ်ခုတည်းကိုသာစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုတန်ပြန်သည့်“ အထောက်အထား” အနေဖြင့်ရှာဖွေခြင်း.
၌ဤ Prause-ရေးသားစာတစ်စောင် ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancetလေးမဟာမိတ်များ (အဲ Janssen, Janniko Georgiadis, ပေတရုဖင်လန်နဲ့ James Pfaus) ကလက်မှတ်ရေးထိုးအခြားရေတိုအက္ခရာတစ်ခုအကြောင်းပြန်ခဲ့သည်: အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း (Potenza et ။ အယ်လ်။ , 2017), မာ့ခ် Potenza, မာတေယူချ် Gola, Valerie Voon, Ariel Kor နှင့် Shane Kraus အားဖြင့်ရေးသား။ (နှစ်ဦးစလုံးအပြည့်အဝအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြန်ထုတ်ပေးပြီး။ )
Prause ရဲ့လေး Co-လက်မှတ်ထိုးသူ၏စကားမစပ်, သုံးအတွက် ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ထို့အပြင်သူမ၏အစောပိုင်းက 2016 ၎င်းတို့၏အမည်များကိုထုတ်ချေး Salt Lake Tribune, Op-Ed သစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်တိုက်ခိုက်နေ နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပေါ်ရပ်တည်ချက်ကို။ ထို Salt Lake Tribune, 600-စကားလုံး Op-Ed အဆိုပါ Lay အများပြည်သူလှည့်ဖြားရန်တွက်ချက်မထောက်ပံ့အခိုင်အမာအပြည့်အဝ chock ဖြစ်ခဲ့သည်။ နှင့်၎င်း၏စာရေးဆရာများ, Prause နှင့်မိတ်ဆွေများ, တစ်ခုတည်းပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ဆက်ဆံရေး, ဒါမှမဟုတ် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပေါ်ညစ်ညမ်းစွဲ, porn ရဲ့သက်ရောက်မှုနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှခဲ့အဘယ်သူအားမျှသောသူ - Op-Ed ကသာ4စာတမ်းများထောက်ပြသည်။ အများအပြားကကျွမ်းကျင်သူတွေက Prause Op-Ed က၏ဤတည်ဆောက်မှုနှင့်အတူတုံ့ပြန်: Op-Ed: အတိအကျညစ်ညမ်းပေါ်တွင်သိပ္ပံအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူနည်း (2016)။ ကန ဦး Op-Ed ၏“ အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များ” နှင့်မတူဘဲတုံ့ပြန်မှုစာရေးဆရာများကကိုးကားခဲ့သည် ရာပေါင်းများစွာသောလေ့လာမှုများနှင့်စာပေမျိုးစုံကိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ သူတို့ထုတ်ပြန်ချက်များထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
ယင်းအတွက်တဦးတည်းပါရဂူဘွဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet မှပျောက်ဆုံးသူကြိုးစားအားထုတ်မှု Salt Lake Tribune, Op-Ed (ပတေရုသဖင်လန်) Prause နှင့်ဒါဝိဒ် Ley (စာရေးသူ၏နဲ့အတူပူးတွဲစာရေးဆရာမတစ်ဦး 2014 ဝါဒဖြန့်အပိုင်းအစမှဖြစ်ပျက် လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား), ပိုင်ခွင့် ဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်အစားရှိထား: အ '' ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ '' Model ရဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2014)။ ဒါကြောင့်ယုံကြည်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်စက္ကူစစ်မှန်သောပြန်လည်သုံးသပ်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ခက်ခဲသည် Ley / Prause / ဖင်လန်စက္ကူအတွက်နီးပါးဘာမျှမတိကျမှုဒါမှမဟုတ်စက္ကူအတွင်းကားအညွှန်းကထောက်ခံသည်။ အောက်ပါ Ley / Prause / ဖင်လန်သူတို့၏ "ပြန်လည်သုံးသပ်" တွင်ထည့်သွင်းများစွာ shenanigans ဖော်ထုတ်, ကိုးကားခြင်းဖြင့်လိုင်း-by-line ကို, ကိုးကားတတ်သောစက္ကူတစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အမျှတစ်ဦးကအရိုးကျိုးရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် pose: အဆိုပါဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်အစားရှိထားသည်။ ၎င်း၏ထူးခြားထင်ရှားဆုံးအချက်မှာညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောဆိုးကျိုးများတင်ပြသောသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုတွေ့ရှိသည့်မည်သည့်လေ့လာမှုကိုမဆိုချန်လှပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Update ကို (ဧပြီလ, 2019): YBOP ၏ဝေဖန်မှုများကိုနှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်စာရေးသူအနည်းငယ်သည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည် Prause et al ။ , ၂၀၁၇ - YBOP ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုးယူရန်နှင့်နီကိုလ်ပရာ့စ်၊ အဲရစ်ဂျန်ဆင်၊ အတုအယောင်မှန် site ကို နှင့် လူမှုမီဒီယာအကောင့်။ အသေးစိတျအဘို့ဤစာမကျြနှာကိုကြည့်ပါ: Porn စွဲ Deniers (www.realyourbrainonporn.com) ကလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ရန်လိုအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု.
Prause ရဲ့ဖွင့် ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ကြိုးစားအားထုတ်မှု, ကျနော်တို့ငါးယောက်မဟုတ်တဦးတည်းကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းသင့်တယ် Prause et al ။, 2017 လက်မှတ်ထိုးသူအစဉ်အဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့ပါသည် "porn သို့မဟုတ်လိင်စွဲမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု။Prause ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးသူ "ထို့အပြင်အချို့ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet စာတစ်စောင်ရပြီ feverishly porn နှင့်လိင်စွဲလမ်း၏အယူအဆတိုက်ခိုက်ခြင်း၏သမိုင်း (အရှင်ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးဘက်လိုက်မှုသရုပ်ပြ) ။ ငါး၏ဆနျ့ကငျြစီ Potenza et al ။ ၌ဤဘာသာရပ်ပေါ်ပထမဦးဆုံးအစာကိုရေးသူကို 2017 Co-စာရေးဆရာများ ( ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet) (porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲအပေါ်မှတ်တိုင်ဦးနှောက်လေ့လာမှုများအပါအဝင်) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါနှင့်အတူဘာသာရပ်များပါဝင်သောမျိုးစုံလေ့လာမှုများပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ မေးခွန်း: အဘယ်ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ခုပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး, ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးခဲ့သူ ပစ်မှတ်ထားသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်များတွင်ပါဝင်နေ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုထောက်ခံသူများသည်သူမထောက်ခံသည့်ဝါဒဖြန့်မှုအတွက်စွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းနေနိုင်ပါသလား။ မကြုံစဖူးဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင် Prause ၏သံသယဖြစ်ဖွယ်လေ့လာမှုများကိုဝေဖန်မှု ၁၉ ခုကိုသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာပေများတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည် -
သံမဏိ et al။ , 2013 - စက္ကူ 1, စက္ကူ 2, စက္ကူ 3, စက္ကူ 4, စက္ကူ 5, စက္ကူ 6, စက္ကူ 7, စက္ကူ 8
Prause et al။ , 2015 - စက္ကူ 1, စက္ကူ 2, စက္ကူ 3, စက္ကူ 4, စက္ကူ 5, စက္ကူ 6, စက္ကူ 7, စက္ကူ 8, စက္ကူ 9, စက္ကူ 10
ချီးကျူးခြင်း & Pfaus, 2015 - စက္ကူ 1
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လျစ်လျူရှုရန်အခမဲ့ခံစားရ Prause et al ရဲ့ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဤလယ်ပြင်၌ရှိသောဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့သိပ္ပံကိုတိုက်ရိုက်သွားပါ။ ဒီမှာက CSBD အပေါ်အာရုံကြောသိပ္ပံ -based စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် 30 စာရင်း ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။ တနည်း၏ဤစာရင်းတွင် peruse porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲသူများအပေါ်ထုတ်ဝေသည့်အာရုံကြောသိပ္ပံအခြေပြုလေ့လာမှု (၅၀ ကျော်ကျော်)။ ၎င်းတို့သည်စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုခိုင်မာသည့်အထောက်အပံ့များပေးပြီးသူတို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကိုထင်ဟပ်စေသောကြောင့် (အထောက်အပံ့မပါသည့်အခိုင်အမာနှင့်ဆန့်ကျင်။ ) Prause et al ။) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားပါ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 60 လေ့လာမှုများထက်ပို။ အားလုံးသည်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်လက္ခဏာနှင့်လက္ခဏာများဖြစ်သည် Prause et al ။ ရဲ့ သည်းခံစိတ်သို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းမ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများအစီရင်ခံခဲ့မှားယွင်းသောပြောဆိုချက်ကို။
သူတို့၌ထငျရှားအဖြစ်ဤတွင်သက်ဆိုင်ရာအက္ခရာများဖြစ်ကြသည် ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet:
အဆိုပါ Potenza စာတစ်စောင်နှင့် Prause ပြန်ကြားချက်
အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း (Potenza et al ။, 2017)
Published: စက်တင်ဘာလ, 2017
၎င်းတို့၏မှတ်ချက်ခုနှစ်တွင် The Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှုဂျွန် B ကို Saunders နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ1 လြောကျပတျစှာ DSM-5 ၏မျိုးဆက်စဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရာစွဲလမ်းမမှန်အဖြစ်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းမမှန်များ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ခွဲခြားနှင့် ပတ်သက်. လက်ရှိငြင်းခုံမှုများ, ဖော်ပြထား2 နှင့် ICD-11 ၏မျှော်လင့်ပါတယ်။3 compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ ICD-11 တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်အဆိုပြုနေပါသည်။3 သို့သော်ကျနော်တို့ကယုတ္တိဗေဒ Saunders နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကလျှောက်ထားယုံကြည်1 ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ compulsive လျှောက်ထားပေလိမ့်မည်။ (hypersexual ရောဂါအဖြစ် operationalized) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ DSM-5 အတွက်ပါဝင်ဘို့စဉ်းစားပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာဖယ်ထုတ်လိုက်, တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်ခြင်း၏မျိုးဆက်ပေမယ့်ခဲ့သည်။2 ဤသည်ဖယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, သုတေသနနှင့်ကုသရေးအားထုတ်မှုနှောင့်နှေးခြင်း, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါများအတွက်တရားဝင်ရောဂါမရှိဘဲ Clinician ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
အလွန်အကျွံလောင်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်း: စွဲလမ်းမမှန်? ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2017; 4: 433-435 PubMed
American Psychiatric Association ။ စိတ်ရောဂါ (DSM-5) ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းကို manual ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းမှထုတ်ဝေခြင်း, Arlington; 2013 ။ Google Scholar
WHO က။ ICD-11 beta ကိုမူကြမ်း။ http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en (ဇူလိုင်လ 18, 2017 ဝင်ရောက်) ။
တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော စွဲလမ်း။ 2016; 111: 2097-2106 PubMed
Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်ခြင်းနှင့် ICD-11 ထဲမှာ "အပြုအမူစှဲ" ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014; 13: 125-127 PubMed
ဒေတာများကို (စွဲလမ်းအဖြစ်လိင်ကိုထောကျပံ့ဘူးPrause et al ။, 2017)
နီကိုးလ် Prause, အဲ Janssen, Janniko Georgiadis, ပတေရုသဖင်လန်, ဂျိမ်း Pfaus
Published: ဒီဇင်ဘာလ 2017
မာ့ခ် Potenza နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ1 ICD-11 တစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်ခွဲခြား "အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ" ထောက်ခံ။ လိင်များစွာသောအခြားလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေနဲ့ရှယ်ယာအာရုံကြောစနစ်များကို like နှိပ်ချို့တဲ့၏အစိတ်အပိုင်းများရှိနေပါတယ်။2 သို့သော်စမ်းသပ်လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုတင်းမာမှု, အခက်အခဲရမ္မက်ထိန်းညှိ, အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ, ချုပ်ရာ, သည်းခံ, ဒါမှမဟုတ်တိုးမြှင့်နှောင်းပိုင်းမှာအပြုသဘောအလားအလာနှင့်အတူဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါအဖြစ်စွဲလမ်း၏သော့ချက်ဒြပ်စင်ကိုထောကျပံ့ဘူး။ စွဲလမ်း၏အဓိက neurobiological အင်္ဂါရပ်နျူကလိယ accumbens အပေါ် synapse ကြောင့်အချိုမှုအာရုံခံ၏တိုးမြှင့်တုန့်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ cue-သွေးဆောင်တဏှာနှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပါအဝင်ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုအကွာအဝေးအားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်ဤပြောင်းလဲမှုများသည် mesocorticolimbic dopamine လမ်းကြောင်း၏ရေရှည်ာင်းအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်။3ယနေ့အထိ, အချိုမှု function ကိုနှင့် dopamine လမ်းကြောင်း၎င်း၏မော်ဂျူအပေါ်လိင်၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်သုတေသနပြုရှားပါးသည်။
လိင်ထူးခြားတဲ့ရံကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အတူတစ်မူလတန်းချသောဆုဖြစ်၏။ လိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပြုသဘောကျန်းမာရေးနှင့်ဘဝကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လိင် supraphysiological ဆွဘို့အခွင့်မပြုပါဘူး။ ဒီဧရိယာ၌သုတေသနအမှန်တကယ်ပူးပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မရှိသေးပါ။ စမ်းသပ်အလုပ်ပုံရိပ်တွေကို အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို, ဒါမှမဟုတ်အလယ်တန်းဆုလာဘ်ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ ပိုများသောသုတေသနလိုအပ်ပေမယ့်မကြာခဏသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံလိင်ကိုရည်မှတ်ဒေတာတစ်ခုစွဲအဖြစ်က၎င်း၏ပါဝင်ပံ့ပိုးကူညီကြဘူး။ ဒါ့အပြင်ဒေတာ compulsive နှင့်ထကြွလွယ်သောမော်ဒယ်များအကြားခွဲခြားရန်လုံလောက်သောမရှိကြပေ။ များစွာသောအခြားချဉ်းကပ်မှုကောင်းစွာ-supported Non-ရောဂါဗေဒမော်ဒယ်များအပါအဝင်တည်ရှိ။4 Potenza နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ5 လည်းစွဲသတ်မှတ်ချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမဟုတ်ခဲ့ဖော်ပြထား: ကြှနျုပျတို့သညျဤအစောပိုငျးကနိဂုံးချုပ်နှင့်အတူသဘောတူသည်။
အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2017; 4: 663-664 PubMed
ပျော်စရာအဘို့လိင်: လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန် neurobiology တစ်ဦးပေါင်းစပ်။ နတ်ဗြာ Urol ။ 2012; 9: 486-498 PubMed
ဆန္ဒပြ neuroplasticity တစ်ဦးရောဂါဗေဒအဖြစ်မူးယစ်ဆေးစွဲ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 166-180 PubMed
Hypersexuality: တစ်ဝေဖန်သုံးသပ်မှုနှငျ့ "sexhavior သံသရာ" ကိုမိတ်ဆက်။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2017; DOI:10.1007/s10508-017-0991-8<
အရာအားလုံးပါဝင်တဲ့ဆိတ်ညံဝါကျ Debunking Prause et al ။ 2017 ကမ်းလှမ်းမှုကိုခဲ့
Prause ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာတန်ပြန်ရန်သာတစ်ခုတည်းဝါကျ (နှင့်မျှမထောက်ပံ့အညွှန်းစာ) များပါဝင်သည် Potenza et al။ ဍီကာ။ (များ၏ထောက်ခံမှုခုနှစ်တွင် Potenza et al။ , စဉ်းစားပါ ဤအ 25 မှတ်ချက်အ / ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ကြောင်း CSBD အားကောင်းမောင်းသန် သင့် WHO ၏အသစ် ICD-11 ရှိစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများအမျိုးအစားအောက်တွင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ ) Prause et al။ ခုနစ်ဟုခေါ်တွင်စွဲလမ်း၏သော့ချက်ဒြပ်စင်"စာရေးသူများကလေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက်ရှာဖွေရန်မရှိသေးပါ။
PRAUSE et al: သို့သော်စမ်းသပ်လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုတင်းမာမှု, အခက်အခဲရမ္မက်ထိန်းညှိ, အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ, ချုပ်ရာ, သည်းခံ, ဒါမှမဟုတ်တိုးမြှင့်နှောင်းပိုင်းမှာအပြုသဘောအလားအလာနှင့်အတူဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါအဖြစ်စွဲလမ်း၏သော့ချက်ဒြပ်စင်ကိုထောကျပံ့ဘူး။
Prause ၏ပစ္စည်းခုနစ်ခုအနက်မှသုံးခုကို“ စွဲလမ်းမှု၏အဓိကကျသောအချက်များ” အဖြစ်အမှန်တကယ်လက်မခံပါ။ တကယ်တော့သို့သော်လေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုသူနှင့်လိင်စွဲသူများအတွက်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်ချို့တဲ့ syndrome ရောဂါနှစ် ဦး စလုံးအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ သူမ၏ရည်မှန်းချက်ထားရှိသည့်အခြားစွဲလမ်းမှုအဓိကသော့ချက် ("တိုးတက်မှုနောက်ကျသောအလားအလာများ") ကိုသာအကဲဖြတ်ခဲ့သည် ကျယ်ပြန့်ဝေဖန်နီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှု။ ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းခုနစ်ခုက Prause သည် EEG နိမ့်ဖတ်ခြင်းတွေ့ရှိချက်ကိုသဘောတူသည် (အနိမ့် နောက်ကျသောအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာများ) အမှန်တကယ်ဆိုလိုသည်မှာမကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကို vanilla porn (ဖြစ်နိုင်သည့်စွဲလမ်းမှုလက္ခဏာတစ်ခု) ကြောင့်ငြီးငွေ့စေသည်။ တကယ်တော့, Prause ရဲ့စက္ကူ၏ဤတရားဝင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူမကမကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများ (des စွဲမော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီ) တွင် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့သဘောတူ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ထို့ကြောင့် Prause ၏ပြောဆိုချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်။ “ စွဲလမ်းမှု၏ဒြပ်စင်” ခုနစ်ခုအနက်မှ ၆ ခုသည် ရှိ porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲသူများနှင့်ပတ်သက်သည့်လေ့လာမှုများတွင်ဖော်ထုတ်ခံခဲ့ရပြီးသတ္တမမြောက်မှာသူမကိုယ်တိုင်သံသယဖြစ်ဖွယ် (သော့ချက်ဖြစ်သည်) နှင့်သူမအပေါ်တွင်သာမူတည်သည် အငြင်းပွားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ.
စာရှုသူများအဘယ်ကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမေးရန်လိုအပ်ပါတယ် Prause et al ။ သူတို့ကိုလှည့်ဖြားရန်ကြိုးပမ်းလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ကြောင်း "စွဲ၏အဓိကဒြပ်စင်" အတွက်ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုပေးခင် Prause et al။ ကျွမ်းကျင်သူများယုံကြည်သည်အဘယ်အရာကိုစွဲ၏အတိုချုပ်ဆန်းစစ်ကြကုန်အံ့ တကယ်တော့ စွဲလမ်း၏အဓိကဒြပ်စင်:
စွဲလမ်းနေဖြင့်သွေးဆောင်အဓိကဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်ဖော်ပြထားကြသည် ဂျော့ခ်ျအက်ဖ် Koob နှင့် Nora ဃ Volkow သူတို့ရဲ့မှတ်တိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်: စွဲလမ်းမှု၏ဦးနှောက်ရောဂါမော်ဒယ် (2016) မှ Neurobiologic တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ။ Koob အရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက် (NIAAA) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပြီး, Volkow မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (NIDA) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။
) 1: အဆိုပါစက္ကူမူးယစ်ဆေးများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့အပြုအမူကိုထင်ရှားစွာပြနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်လေး key ကိုဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြထားတယ် အသိ, 2) Desensitization, 3) အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (hypofrontality), 4) ချွတ်ယွင်းနေစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်က။ ထိုအဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအားလုံး4များစွာအာရုံကြောလေ့လာမှုများအကြားဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသော:
သတင်းပို့လေ့လာရေး ာင်း : porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲထဲမှာ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
cue-reactivity ကို ဦး နှောက်လေ့လာမှု (သို့) အသုံးပြုရန်ပြင်းထန်သောစိတ်နေသဘောထားများမှတစ်ဆင့်အကဲဖြတ်သည်။
သတင်းပို့လေ့လာရေး desensitization သို့မဟုတ် porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက်လေ့: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8။ ဆုလာဘ် sensitivity ကို (ဒီထက်ပျော်မွေ့), ညစ်ညမ်းစေရန်လေ့ (အနိမ့်ဦးနှောက်ကို Activation), သည်းခံစိတ် (အသစ်အမျိုးအစားမှတင်းမာမှု) လျော့နည်းသွားအဖြစ်တငျပွ။
functioning ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်သတင်းပို့လေ့လာရေး (hypofrontalityporn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက်) သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ prefrontal လှုပ်ရှားမှု: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19။ အားနည်း willpower, မတရားသော, အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, ဆင်းရဲသောဆုံးဖြတ်ချက်ချအဖြစ်တငျပွ။
တစ်ဦးကိုညွှန်းလေ့လာရေး အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်က : porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲထဲမှာ 1, 2, 3, 4, 5.
၎င်းသည်အစွမ်းထက် sensitized လမ်းကြောင်းကိုတက်ကြွသောကြောင့်, တပ်မက်ခြင်းနှင့် relapse မှ ဦး ဆောင်အသေးစားစိတ်ဖိစီးမှုအဖြစ်ထင်ရှား။ ထို့အပြင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းက ဦး နှောက်၏စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုသက်ဝင်စေပြီးစိုးရိမ်မှု၊ စိတ်တိုခြင်း၊
ကျွန်တော်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ Prause et al ။, 2017, ချယ်ရီ - ကောက်ယူနှင့်လူမှုမီဒီယာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်ဂျာနယ်လစ်အီးမေးလ်များကိုမှချိတ်ဆက်ရန် "တရားဝင်" စာတစ်စောင်ထုတ်လုပ်ရန်စွဲ၏အဓိကဒြပ်စင်ပုံပျက်။
ကြောင်း "စွဲ၏အဓိကဒြပ်စင်" အတွက်ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှု Prause et al ။ ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်ပြောဆိုထားသည်
ဤအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွဲလမ်းမှုမှားယွင်းသောမှားယွင်းစွာပြောဆိုခြင်းမရှိသော“ စွဲလမ်းမှု၏အဓိကဒြပ်စင်များ” အတွက်ပင်ကိုယ်အထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။
PRAUSE et al: သို့သော်စမ်းသပ်လေ့လာမှုများကဲ့သို့သောစွဲ၏သော့ချက် element တွေကို support မပါဘူး အသုံးပြုမှုတင်းမာမှု, အခက်အခဲရမ္မက်ထိန်းညှိ, အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ, ရပ်နားခြင်းနှင့်အတူဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ, သည်းခံစိတ်, or တိုးမြှင့်နှောင်းပိုင်းမှာအပြုသဘောအလားအလာ။
၁။ အသုံးပြုမှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်“ သည်းခံစိတ်”
Prause et al။ မှားသည်“ သည်းခံစိတ်” နှင့်“ အသုံးပြုမှုတိုးပွားလာခြင်း” ကိုစွဲလမ်းစေသည့်သီးခြားဒြပ်စင်များအဖြစ်စာရင်းပြုသည်။ သည်းခံစိတ်တူညီမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ပိုမိုလှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်သောသည်းခံမှုကိုလည်းလေ့ကျင့်ခြင်း (မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်နှိုးဆွမှုအားတုံ့ပြန်မှုနည်းပါးလာခြင်း) ဟုလည်းခေါ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးသူနှင့်အတူသည်းခံမှု / လေ့ကျင့်မှုသည်တူညီသောမြင့်မားမှုရရှိရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများလိုအပ်ကြောင်းပြသသည်။ ဤသည်အသုံးပြုမှုတိုးပွားလာသည်။ porn အသုံးပြုသူများနှင့်သည်းခံခြင်း / လေ့ကျင့်ခြင်းသည်လက်ရှိအမျိုးအစားသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောအမျိုးအစားများနှင့်ပျင်းရိငြီးငွေ့စေနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းသောအစွန်းရောက်အမျိုးအစားအသစ်များသို့ကူးပြောင်းခြင်းဖြင့်ပိုမိုစိတ်အားတက်ကြွစေသည်။
လက်တွေ့နှင့်သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့ဦးဆောင်သည်းခံစိတ်များအတွက်တည်ရှိနေစဉ်, မည်သည့်လေ့လာမှုများရှိသနညျး တကယ်တော့, 50 ကျော်လေ့လာမှုများမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်တွေ့ရှိချက်တသမတ်တည်းလေ့သို့မဟုတ်တင်းမာမှုအစီရင်ခံခဲ့ကြ - အားလုံးအဆင်ပြေ Prause နှင့်သူမ၏တဖက်သတ် Co-စာရေးဆရာများအားဖြင့်လျစ်လျူရှု။ ဤတွင်ကျနော်တို့တင်းမာမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်လေ့ / သည်းခံစိတ်အနည်းငယ်ဥပမာများကို 50 လေ့လာမှုများ၏ဤစာရင်းထဲက:
porn အသုံးပြုသူများကိုမေးမြန်းဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုတစ်ခုမှာ တိုက်ရိုက် တင်းမာမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး: "အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု "(2016)။ လူ 49% ယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်ချိန်ကစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမဟုတျကွောငျး porn ကြည့်ရှုသတင်းပေးပို့အဖြစ်လေ့လာမှု, တင်းမာမှုကတင်ပြထားပါတယ်။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
အနည်းဆုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့လေးဆယ်ကိုးရာခိုင်နှုန်းဟာတခါတရံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာဖွေနေသို့မဟုတ်ယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်စဉ်းစားမခံခဲ့ဘူးကြောင်းကို OSAs တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရ။
"Dual Control Model - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ဆိုင်ရာတားစီးမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အခန်းကဏ္။, "2007 ခုနှစ်။ အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, အယ်ဒီတာ: အဲ Janssen, pp.197-222 ။ (ပျှမ်းမျှအသက် 50 ခဲ့) (ယခင်စမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုသည့်အမျိုးအစား) ကိုဗီဒီယိုညစ်ညမ်းအလုပ်သမားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာတော့လုလင် 29% နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာနိုင်ဘူးသို့မဟုတ် porn နှင့်အတူစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်။ အဆိုပါတုန်လှုပ်သုတေသီများအမျိုးသား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ,
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြုံတွေ့ရလူတို့သညျ porn "ခပ်သိမ်းကိုသိပါသည်" နှင့်ရှိရာအရက်ဆိုင်များနှင့် bathhouse အတွက်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏကိုသုံးစွဲခဲ့သောအဆိုပါသုတေသနပညာရှင်များကဖော်ပြထား "စဉ်ဆက်မပြတ်ကစား။ ":
အဆိုပါဘာသာရပ်များနှင့်အတူစကားစမြည်ထိုသူအချို့အတွက် erotica တစ်ဦးမြင့်မားသောထိတွေ့မှုအလွန်တိကျတဲ့များအတွက်လိုအပ်ချက်နဲ့ပေါင်းစပ်အချို့ကိစ္စများတွင်, "vanilla လိင်" erotica နှင့်အသစ်အဆန်းများနှင့်အပြောင်းအလဲတစ်ခုတိုးလာလိုအပ်ချက်တစ်ခုအောက်ပိုင်း Response အတွက်ရလဒ်ကြသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးအားဖြည့် နှိုးဆော်ခြင်းရနိုင်ရန်အတွက်လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများ။
ဘယ်လိုဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှုကော? "Bမိုးရွာရွာဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် " (Küနှင်း & ဂယ်လီနာ, 2014) ။ မက်စ်ပန့်ခ်စ်အင်စတီကျု၏ fMRI လေ့လာမှုသည်ဆုလာဘ်စနစ် (dorsal striatum) တွင်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုပမာဏနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လိင်မှုဆိုင်ရာဓါတ်ပုံများကိုခေတ္တကြည့်ရှုစဉ်ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆုလာဘ် circuit activation နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ သုတေသီများကသူတို့၏တွေ့ရှိချက်များကတူညီသောနှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုရရှိရန်ပိုမိုနှိုးဆွမှုအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော desensitization နှင့်သည်းခံနိုင်စွမ်းကိုပြသခဲ့သည်ဟုယူဆခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်စာရေးသူ ဆီမှKühnအောက်ပါအချက်များကိုကပြောပါတယ် သူမ၏လေ့လာမှုမှာ about:
ဤသည်ညစ်ညမ်းပုံမှန်စားသုံးမှုအကျိုးကို system ကို dulls ဆိုလိုနိုင်ဘူး။ ... ထို့ကြောင့် ... မြင့်မားတဲ့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတူတူပင်ဆုလာဘ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့အစဉ်အဆက်အားကောင်းလှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။ ဤသည်ကအခြားဦးနှောက်ဒေသများဖို့ striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုအပေါ်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်: မြင့်သောညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကျိုးကိုဧရိယာနှင့် prefrontal cortex အကြားမှိန်ဖျော့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
နောက်ထပ်ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှု "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှအသစ်အဆန်း, အေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု"(2015) ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံသူများအားလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုပိုမိုလေ့ကျင့်ရန်အစီရင်ခံသည့်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ် fMRI ၏လေ့လာမှု ကောက်နှုတ်ချက် -
အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသောလှုံ့ဆော်မှုများသည်ကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်စွာရောက်ရှိနေပြီး၊ ဤအင်္ဂါရပ်သည်လူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားလာစေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်တူညီသောရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ရှင်ကိုထပ်ခါတလဲလဲကြည့်ရှုနေသောကျန်းမာနေသည့်အထီးများသည်လှုံ့ဆော်မှုကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနည်းပါးခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနည်းခြင်းနှင့်စုပ်ယူမှုနည်းခြင်းတို့ကိုတွေ့ရသည် (Koukounas and Over, 2000) ။ ... လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအားအထီးကျန်ဆန်သောလိင်အပြုအမူသည်အမျိုးသားများအတွင်းလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအသစ်များကိုရှာဖွေခြင်း၊
အလားတူလေ့ကျင့်ခန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအတူတူပင် porn ဗီဒီယိုအကြိမ်ကြိမ်ပြနေသောကျန်းမာသောယောက်ျားများတွင်တွေ့ရသည်။ သို့သော်သူတို့သည်ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကိုကြည့်သောအခါစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်နှိုးဆွမှုအဆင့်သည်မူလအဆင့်သို့ပြန်သွားသည်။ ဒီအလေ့အကျင့်တားဆီးဖို့, လိင်စွဲလမ်းအသစ်သောပုံရိပ်တွေ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ရေးရှာအံ့သောငှါလိုအပ်ကြောင်းဆိုလို။ တနည်းအားဖြင့်လေ့, ဝတ္ထုပုံရိပ်တွေရှာဖွေရေးမောင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ Voon က“ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်။ လိင်မှုကိစ္စကိုမည်သည့်အရာကဖြစ်စေသည်ကိုမသိရသေးပါ။ အချို့သူများသည်အခြားသူများထက်စွဲလမ်းမှုကို ပို၍ စွဲလမ်းစေနိုင်ကြောင်း၊ သို့သော်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရှိနေသောအသစ်သောလိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များသည်အဆုံးသတ်ပုံမရခြင်းသည်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး၊ လွတ်မြောက်ရန်ပိုခက်ခဲသည်။ "
သူကိုယ်တိုင်အမှန်တကယ်လေ့ကျင့်မှုတွေ့ရှိခဲ့သည့် Prause ၏ကိုယ်ပိုင် EEG လေ့လာမှုကောမည်သို့နည်း။ "Porn စွဲ" နဲ့တသမတ်တည်းရှိမနေသောပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိင်ပုံများအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာ Module (Prause et al ။, 2015)။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "သူတို့ porn ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကြုံနေရတစ်ဦးချင်းစီ" vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ခဲစာရေးသူက ဤအရလဒ်များကို "porn စွဲ debunk ။ " မလုပ်ပဲသို့သော်တရားဝင်သိပ္ပံပညာရှင်သူတို့ရဲ့တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုတစ်ခု debunked မူကြောင်းကိုတောင်းဆိုမယ်လို့အဘယျသို့ လေ့လာမှုကောင်းစွာထူထောင်လယ်ပြင်?
၏အဖြစ်မှန်မှာတော့တွေ့ရှိချက် Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat ကို (2014)ပိုမိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရာ။ အဆိုပါ Prause et al။ တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းနှင့်အတူ align BANCA et al ။ 2015အနိမ့် EEG ဖတ်ခြင်းကဘာသာရပ်များသည်ထိန်းချုပ်မှုများထက်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် vanilla porn ၏ငြိမ်သက်သောပုံရိပ်များကိုအထင်မသေးပါ။ သူတို့က (လေ့သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။9peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများထက်လျော့နည်းခြင်းမရှိပါကြောင်းသဘောတူ Prause et al ။ 2015 အမှန်တကယ် (စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီသောအရာ) မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
သည်းခံမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းမှုနှစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြသည့်လေ့လာမှုတစ်ခု (Prause's ပစ္စည်းနှစ်မျိုး) ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet အပိုင်းအစမဟုတ်မမှန်) မျှလေ့လာမှုဖြစ်စေအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာ: "ဟုအဆိုပါပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုစကေး၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (PPCS)" (2017) - ဤစာတမ်းသည်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲမေးခွန်းအပြီးလုပ်ပါတယ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဤသည် 18-ကို item မေးခွန်းလွှာအောက်ပါ6မေးခွန်းများကိုအတူသည်းခံစိတ်နဲ့ဆုတ်ခွာအကဲဖြတ်:
မေးခွန်းတစ်ခုစီကို Likert စကေးမှ ၁ ခုမှ ၇ ခုအထိရရှိသည်။ အောက်ပါဇယားသည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများကိုစုစုပေါင်းရမှတ်များအရ ၃ မျိုးခွဲခြားထားသည် -“ ပြproနာမရှိသော၊ အောက်ပါရလဒ်များအရ porn အသုံးပြုသူများသည်သည်းခံခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုကြုံတွေ့ရသည်
ရိုးရှင်းစွာထားပါ, ဒီလေ့လာမှုအမှန်တကယ်တင်းမာမှု (သည်းခံစိတ်) နှင့်ရုပ်သိမ်းရေးအကြောင်းမေး - နှင့်နှစ်ဦးစလုံးအချို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်သတင်းပေးပို့နေကြသည်။
(ဤသည်အလွန်ကြီးမားn = 6463) လူငယ်များအကြောင်းလေ့လာခြင်းသည် Prause et al တိုင်းတွင် debunks များဖြစ်သည်။ အခိုင်အမာ - ပိုလန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားများအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏ပျံ့နှံ့မှု, ပုံစံများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ခံစားသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2019). လိင်မှုနှိုးဆွရန်အတွက်အစွန်းရောက်အမျိုးအစားများလိုအပ်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်သည့်အခါရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ၊ ညစ်ညမ်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၊ အပြာစွဲခြင်းနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ သည်းခံစိတ် / လေ့ကျင့်ခန်း / အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကောက်နုတ်ချက်အချို့ -
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအများဆုံး Self-ရိပ်မိဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများပါဝင်သည်: အပိုရှည်ဆွဘို့အလိုအပ်ချက် (12.0%) နှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (17.6%) အော်ဂဇင်ရောက်ရန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအတွက်လျော့နည်း (24.5%) ...
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလည်းပိုရှည်ဆွနှင့်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းစားသုံးသည့်အခါအော်ဂဇင်ရောက်ရှိဖို့ရန်လိုအပ်သည်ထက်ပိုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအတွက်ခြုံငုံကျဆင်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်အစောပိုင်းကထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အလားအလာ desensitization နှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအကြံပြု ... ..
အဆိုပါထိတွေ့မှုအချိန်ကာလ၏သင်တန်းတွင်ဖြစ်ပေါ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုများကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်: လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ (46.0%) ကိုက်ညီနှင့်ပိုပြီးသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းပစ္စည်းများအသုံးပြုမှု, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း (60.9%) ၏ဝတ္ထုအမျိုးအစားမှ switching အစွန်းရောက် (အကြမ်းဖက်) ပစ္စည်း (32.0%) ။ အဆုံးစွန်သောပိုပြီးမကြာခဏ uninquisitive အဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့် ပတ်သက်. သူတို့အဖို့နှိုင်းယှဉ်စပ်စုအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားအမျိုးသမီးများကသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်
သည်းခံစိတ် / တင်းမာမှု၏အပိုဆောင်းအရိပ်လက္ခဏာ: ပွင့်လင်းမျိုးစုံ tabs များလိုအပ်နေခြင်းနှင့်နေအိမ်ပြင်ပ porn ကို အသုံးပြု. :
ကျောင်းသားအများစုပုဂ္ဂလိက mode ကို (76.5% ၏သုံးစွဲဖို့ဝန်ခံ, n = 3256) နှင့်မျိုးစုံပြတင်းပေါက် (51.5%, n = 2190) အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း browsing အခါ။ နေအိမ်အပြင်ဘက်မှာ porn အသုံးပြုခြင်း (33.0% တို့ကကြေငြာခဲ့သည်n = 1404) ။
သာ. ကြီးသောပြဿနာများနှင့်စွဲလမ်းနှင့်ပတ်သက်သောပထမဆုံးအသုံးပြုမှုအစောပိုင်းကအသက် (ဒီသွယ်ဝိုက်သည်းခံစိတ်-လေ့-တင်းမာမှုညွှန်ပြ):
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်-အမြင့်ဆုံးလေးသာမှုအတွက်ညစ်ညမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုအောက်တွင် 12 နှစ်သို့မဟုတ်မှာထိတွေ့အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများအဘို့အတွေ့ရှိခဲ့သည်။ cross-section လေ့လာမှု causation တစ်ဦးအကဲဖြတ်ခွင့်ပြုမထားဘူးသော်လည်း, ဒီတွေ့ရှိချက်အမှန်ပင်ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာနှင့်အတူငယ်စဉ်ကလေးဘဝအသင်းအဖွဲ့ရေရှည်ရလဒ်များရှိစေခြင်းငှါညွှန်ပြစေခြင်းငှါ ... ။
စွဲလမ်းမှုနှုန်းက "Self-ရိပ်မိ" ခဲ့သော်လည်းအတော်လေးမြင့်မားတဲ့ခဲ့ကြသည်:
နေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် Self-ရိပ်မိစွဲအသီးသီး 10.7% နှင့် 15.5% ကဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့သည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုတောင် Non-စွဲ (စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများရဲ့အဓိပ္ပါယ်နိမိတ်လက္ခဏာ) တွင်, ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်:
လက်ရှိညစ်ညမ်းစားသုံးသူဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကြေညာ (ဎ = 4260) သူကိုစစ်တမ်းကောက်ယူရှိသူများအနက် 51.0% မျှ dif အတူကသုံးပြီးအရှုံးပေးဖို့အနည်းဆုံးကြိုးပမ်းမှုအောင်မှဝန်ခံခဲ့သည်? ference ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကြားကထိုအကြိုးစားမှု၏ကြိမ်နှုန်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတို့၏အမျိုးအ 72.2% ffect? ​​အနည်းဆုံးဆက်စပ်အီး၏အတွေ့အကြုံညွှန်ပြလျက်, အများဆုံးမကြာခဏလေ့လာတွေ့ရှိခေါ်ဆောင်သွားအိပ်မက် (53.5%), စိတ်တိုတာတွေ (26.4%), အာရုံစူးစိုက်မှုကိုနှောင့်အယှက် (26.0%), နှင့်အသိပါဝင်သည် အထီးကျန် (22.2%) (ဇယား 2) ။
ငါပေးနိုင်တယ်လို့ 45 ပိုပြီးလေ့လာမှုများ “ ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ” ကိုလေ့ကျင့်ရန်အစီရင်ခံခြင်းသို့မဟုတ်အကြံပြုခြင်းကိုပိုမိုအစွန်းရောက်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောအမျိုးအစားများသို့တိုးမြှင့်ခြင်း၊ Prause et al ။ အယ်ဒီတာထံစာတစ်စောင်အဖြစ် ၀ င်ရောက်ဖြန့်ချီရေးဝါဒဖြန့်သည်။
မှစ. လေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာ Prause's သည်ညစ်ညမ်းသော / လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုများပြားလှသောဆိုးကျိုးများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံထားပါတယ်အရေးဆိုမှုတစ်ခုလိမ်လည်မှုအဖြစ်စာဖျောထုတျ။
လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုအကဲဖြတ်သည့်လေ့လာမှုရာပေါင်းများစွာမှအများစုသည်အောက်ဖော်ပြပါညစ်ညမ်း / လိင်စွဲလမ်းမှုတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသောအလုပ်များကိုအသုံးပြုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှု၏အဓိကအချက်မှာ“ ဆိုးရွားသည့်ဆိုးကျိုးများရှိသော်လည်းဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း” ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အောက်ပါမေးခွန်းများအားလုံးသည် CSB နှင့်သက်ဆိုင်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ မေးမြန်းကြသည် (link များသည် Google scholar လေ့လာမှုများဖြစ်သည်)
compulsive ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု (CPC),
ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory (CPUI),
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး (SCS),
Hypersexual အပြုအမူ Inventory (HBI),
Hypersexual အပြုအမူအကျိုးဆက်များစကေး (HBCS)
တောင်မှဆိတ်ကွယ်ရာစွဲအန္တရာယ်များ၏ပြဿနာကနေပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထား၏သဘောအရဆိုလျှင်အမျိုးမျိုးသောအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များမှ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ ဥပမာ, 70 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေကိုပိုမိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးမျိုးကျေနပ်မှု။ porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ? ဒီစာရင်းပါပါတယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 35 လေ့လာမှုများ.
ယုံကြည်ချက်, သဘောထားနှင့်အပြုအမူထိခိုက် porn အသုံးပြုမှု? တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများထုတ်စစ်ဆေး: 35 ကျော်လေ့လာမှုများအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးအမြင်များဆီသို့ "ကို un-သာတူညီမျှသဘောထား" ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ သို့မဟုတ်ဤ 2016 Meta-analysis သည်မှဤအကျဉ်းချုပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား - မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015။ ကောက်နုတ်ချက်:
109 လေ့လာမှုများပါရှိသောကြောင့် 135 စာပေတစ်ဦးကစုစုပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြ။ ဓာတ်ခွဲခန်းထိတွေ့မှုနှင့်ဤအကြောင်းအရာပုံမှန်အစည်းအဝေး, နေ့တိုင်းထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးကိုတိုက်ရိုက်ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်အပါအဝင်အကျိုးဆက်များတစ်အကွာအဝေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောတသမတ်တည်းသက်သေအထောက်အထားများ, သာ. ကြီးမြတ် Self-objectification, လိင်အရအခွင့်အရေးယုံကြည်ချက်နှင့်ရန်ဘက်ပြုမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်ပိုမိုထောက်ခံမှုပေးအဆိုပါတွေ့ရှိချက်များနှင့် အမြိုးသမီးမြားအပျေါအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု သာ. ကြီးမြတ်သည်းခံစိတ်။ ထို့အပြင်ဤအကြောင်းအရာစမ်းသပ်ထိတွေ့အမျိုးသမီးအရည်အချင်းကို, စာရိတ္တနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တခုလျော့နည်းသွားအမြင်ရှိသည်ဖို့အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးဦးဆောင်နေသည်။
22 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှ7လေ့လာမှုများဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ စားသုံးမှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းတို့တွင်အများနှင့် Cross-Section နှင့် longitudinal လေ့လာမှုများအတွက်နိုင်ငံတကာကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျူးကျော်များနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သညျ။ နှစ်ဦးစလုံးသိသိသာသာခဲ့ကြသည်ပေမယ့်အသင်းအဖွဲ့များ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ထက်နှုတ်များအတွက်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များ၏ယေဘုယျပုံစံအကြမ်းဖက်အကြောင်းအရာတစ်ခုပိုမိုဆိုးဝါးအချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုသည်။
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကောအသို့နည်း ၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး 250 ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာမှုများကျော်ဒါမှမဟုတ်စာပေဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13။ သုတေသန၏ဤ 2012 ပြန်လည်သုံးသပ်၏နိဂုံးမှသည် - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း:
စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများအကြံပြု ညစ်ညမ်းလောင်သူလူငယ်လက်တွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးများနှင့်ယုံကြည်ချက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။ တွေ့ရှိချက်များထဲတွင်အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ၏အဆင့်မြင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်, အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ညစ်ညမ်းပိုပြီးမကြာခဏစားသုံးမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းပြီ ... ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်လိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏တိုးချဲ့ဒီဂရီနှင့်အတူအကြမ်းဖက်မှုကိုသရုပ်ဖော်ကြောင်းညစ်ညမ်း၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ အဆိုပါစာပေညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် Self-အယူအဆ၏မြီးကောင်ပေါက် '' အသုံးပြုမှုအကြားအချို့ဆက်စပ်မှုညွှန်ပြပါဘူး။ ယောက်ျားလေးများသူတို့အဖြစ် virile သို့မဟုတ်ဤမီဒီယာအတွက်ယောက်ျားအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါကိုကွောကျရှံ့နေချိန်တွင်မိန်းကလေးများ, သူတို့ကညစ်ညမ်းပစ္စည်းအတွက်ရှုမြင်မိန်းမများမှကိုယ်ထိလက်ရောက်ယုတ်ညံ့ခံစားသတင်းပို့ပါ။ မြီးကောင်ပေါက်လည်းညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုသည်၎င်းတို့၏ Self-ယုံကြည်မှုနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာတိုးအဖြစ်လျော့နည်းသွားကြောင်းသတင်းပို့သည်။ ထို့အပြင်သုတေသန, အင်တာနက်ပေါ်ရှိတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအမြီးကောင်ပေါက်, လူမှုရေးပေါင်းစည်းမှု၏အနိမ့်ဒီဂရီရှိသည်အကြံပြုအကငျြ့ပြဿနာများ, ဆိုးသွမ်းအပြုအမူများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်, စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုများတွင်တိုးနှင့်စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Bond လျော့နည်းသွားသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုမှ“ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုများအားအခက်တွေ့နေခြင်းအားအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းမရှိသေး” ဟူသောဖော်ပြချက်သည်ယခင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်မှုမရှိချေ။ နံပါတ် (၂) တွင်ဖော်ပြထားသောညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုမေးခွန်းပုံစံများသည်ဘာသာရပ်များသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်လိင်အပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲရှိမရှိအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်တစ်ဖန်“ ဆိုးကျိုးများရှိသော်လည်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း” သည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်၏အမာခံတစ်ခုဖြစ်ပြီးပုံမှန်မေးခွန်းပုံစံများဖြင့်အကဲဖြတ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါညစ်ညမ်း / လိင်စွဲလမ်းမှုပုံရိပ်များမှနမူနာအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသည်။
ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory (CPUI) -
ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး (PPUS) -
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး (SCS) -
Hypersexual အပြုအမူ Inventory (HBI) -
ဤအပိုင်းကို CSB မေးခွန်းလွှာများဖြင့်ဖြည့်ရန်မလိုပါ။ မင်းအကြံဥာဏ်ရတယ် Prause et al ရဲ့ အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုအစဉ်အဆက် "အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ" အစီရင်ခံခဲ့သည်အနတ္တနှင့်တစ် ဦး စော်ကားကြောင်းပြောဆိုကြသည် ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet သူတို့ရဲ့စာတစ်စောင်ထုတ်ဝေကြောင်းဂျာနယ်။
၄။“ ဆုချို့တဲ့သောရောဂါ” ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း "Reward Deficiency Syndrome" (RDS) သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရစွဲလမ်းနေသည့်စွဲလမ်းမှုအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ။ Prause et al ။ ကသေးအစီရင်ခံတင်ပြကြရသည်တဲ့ key ကိုဒြပ်စင်စွဲသောမှားယွင်းသောစှဲပေးရသူတို့ရဲ့စာရင်းကိုသို့ RDS ပစ်လွှတ်လိုက်တယ်။ RDS အကြောင်းပညာသဘောတူညီမှုကမရှိပေမယ့် ရှိပါတယ် (အသေးစိတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) အကဲဖြတ်ခဲ့တာ။
As သုတေသီဖြစ်သူ Kenneth Blum အားဖြင့်ပဋိသန္ဓေ“ Reward Deficiency Syndrome” ကို dopamine receptor များတွင်ချို့တဲ့ခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသည့်မျိုးရိုးဗီဇအားဖြင့်နိမ့်သော dopamine အချက်ပြမှုဟုဖော်ပြထားသည်။ Blum ၏ယူဆချက်အရ RDS သည်ပုံမှန် dopamine လုပ်ငန်းဆောင်တာရှိသောလူများထက်ပျော်ရွှင်မှု (anhedonia) နည်းသည်ဟုခံစားရသည်။ ထို့အပြင် RDS ရှိသူများသည်သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများ (အညစ်အကြေး၊ လောင်းကစားလိင်) နှင့်စွဲစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းဖြင့် dopamine (အပျော်အပါးနည်းပါးခြင်း) ကိုပိုမိုနည်းပါးစွာကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးစွဲလမ်းသူများဖြစ်လာရန်အခွင့်အလမ်းပိုများစေသည်။
ကျွန်မမာ့ခ် Lewis ကအားဖြင့်ဆောင်းပါးနားလည်ရန်ဤလွယ်ကူသောအကြံပြု: အဆိုပါတုန်လှုပ် Gone အခါ: Deficiency Syndrome ဆု. Lewis က အဆိုပါယူဆချက်နှင့်အတူမူလတန်းပြဿနာကရှင်းပြသည်:
ယင်း၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသော်လည်း RDS ပုံစံနှင့် ပတ်သက်၍ လေးနက်သောပြproblemsနာများရှိသည်။ ငါနှစ်ခုပဲနာမည်ပေးပါမယ် လေ့လာမှုများစွာအရမူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အရက်သုံးစွဲခြင်းသည်သူ့ဟာသူသည် dopamine receptor သိပ်သည်းဆကိုလျော့နည်းစေသည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး dopamine receptor activation ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထို receptors များသည်၎င်းတို့ကိုပျော်စရာပစ္စည်းများဖြင့်အနိုင်ကျင့်သောအခါ၎င်းတို့သည်လောင်ကျွမ်းခြင်း (သို့) desensitized ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် RDS သည်အမြဲတမ်းမျိုးရိုးဗီဇမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုယ်တိုင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စွဲသည်နိမ့်သော dopamine အချက်ပြခြင်း၊ desensitization။ အစောပိုင်းကရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း, desensitization တူညီမြင့်မားသောသို့မဟုတ်နှိုးဆော်ခြင်းပြည်နယ်အောင်မြင်ရန်သာ။ ကြီးမြတ်တစ်ခုလုံးကိုလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့်သည်းခံစိတ်, စေပါတယ်။ RDS နှင့်ပတ်သက်သော Prause ၏မရေမရာပြောဆိုမှုများနှင့်ဆန့်ကျင်။ အာရုံကြောသိပ္ပံအခြေပြုလေ့လာချက် (၆) ခုသည်တွေ့ရှိချက်များကို desensitization (သို့) လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8။ ငါတို့သည်လည်းများစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလျှင် လေ့နှင့်တင်းမာမှုလျှော့ချ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုများ, ၄၀ ကျော်သည် `desensitization or အောက်တွင်ကျရောက်သည်။.
အဆိုပါစွဲ၏ရေပန်းစားသီအိုရီ - အ မက်လုံးပေး-sensitive မော်ဒယ် နှင့်သက်သေအထောက်အထား - လုံးဝအားဖြင့်လျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည် Prause et al ။ အဖြစ်ာင်းကျမှုကိုထငျရှားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒီအာရုံကြောအပြောင်းအလဲများ နုတ်မ like နှိပ်သို့မဟုတ်အပျြောအပါးနေချိန်တွင် "လို" သို့မဟုတ်တဏှာတိုးလာ။ အဖြစ် Potenza et al အထဲကထောက်ပြ, များစွာသော CSB လေ့လာမှုများမက်လုံးပေးာင်းမော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံတင်ပြကြပြီ
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ၏ neurobiology သို့သုတေသနအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု, မက်လုံးပေး salience အရည်အသွေးများနှင့်စှဲနှင့်အတူများပြားလှသောတူညီအကြံပြုကြောင်းဦးနှောက်-based cue reactivity ကိုပတ်သက်တွေ့ရှိချက်ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။
အားလုံးအထက်ပါစွဲ၏မက်လုံးပေး-sensitive မော်ဒယ်ထောက်ခံမှုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ model နှင့်အတူ align လုပ်ဖို့အဆိုပါ neuroscience-based CSB လေ့လာမှုများ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23, 24, 25, 26, 27.
အမှန်မှာဆေးစွဲနေခြင်းကိုရောဂါလက္ခဏာပြရန်အတွက်ဆေးဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာများမလိုအပ်ပါ။ ပထမဆုံးဘာသာစကားကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။သည်းခံစိတ်မဟုတ်သလိုဆုတ်ခွာမယ့်ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုများအတွက်လိုအပ်သောသို့မဟုတ်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ် ..."ဟုအဆိုပါ DSM-IV-TR နှင့် DSM-5 နှစ်ဦးစလုံးအတွက်။ ဒုတိယ, အဖန်ဖန်-ထပ်ခါတလဲလဲ sexology "စစ်မှန်သော" စှဲမှားယွင်းစွာ conflates ပြင်းထန်, အသက်အန္တရာယ်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုကြသည် ဇီဝကမ္မမှီခို နှင့် စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ။ စာပေ၏ဤ 2015 ပြန်လည်သုံးသပ်ရာမှတစ်ဦးကောက်နုတ်ချက် (ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းပြချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို):
ဤအဆင့်၏အဓိကအချက်ဆုတ်ခွာတိကျတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာထံမှဇီဝကမ္မဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစား, အနှုတ်ကနေတဆင့်ဒီ model အစီအမံဆုတ်ခွာအထက်ပါဖြစ်စဉ်ကိုကနေရရှိလာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, dysphoria နဲ့စိတ်တိုတာတွေအဖြစ်ဆန္ဒရှိစိတ်ခံစားမှု [စွဲ၏ဤမော်ဒယ်အတွက်ဆုတ်ခွာ၏ညွှန်းကိန်းများမှာ43,45] ။ စွဲလမ်းဖြစ်ခြင်းအပြုအမူများ၏စိတ်ကူးဆန့်ကျင်သုတေသီများမကြာခဏ [detoxification နှင့်အတူဆုတ်ခွာရှုတ်ထွေး, ဒီဝေဖန်ခွဲခြားလျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်နားလည်မှုလွဲ46,47].
ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေအနေနဲ့စွဲ diagnosis မှပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပါမည်ကြောင်းဟုဆိုကာအတွက် Prause et al ။ ရှုတ်ထွေး၏လူသစ်အမှားစေသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို နှင့် စှဲမွဲမှု။ ဤဝေါဟာရများကိုပြောရလျှင်မဟုတ် (Pfaus YBOP critiqued တစ် 2016 ဆောင်းပါး၌ဤတူညီတဲ့အမှားလုပ်: ဂျင်မ် Pfaus ရဲ့ "မှ YBOP တုံ့ပြန်မှုသိပ္ပံပညာရှင်ယုံကြည်စိတ်ချ: လိင်စွဲလမ်းနေတဲ့ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါသည်"ဇန်နဝါရီလ, 2016)
သူကပြောပါတယ်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုတေသနနှင့် မြောက်မြားစွာ Self-အစီရင်ခံစာများ အချို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအတှေ့အကွုံမြားကိုသရုပ်ပြ ဆုတ်ခွာ နှင့် / သို့မဟုတ် သည်းခံနေခြင်း - အရာကိုမကြာခဏလည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို၏ဝိသေသဖြစ်ကြသည်။ တကယ်တော့ဟောင်း porn အသုံးပြုသူများကိုမှန်မှန်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပြင်းထန်သတင်းပို့ ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေမူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်ယူ၏ဆင်တူနေသော: အိပ်မပျော်, စိုးရိမ်စိတ်, ယားယံခြင်း, စိတျအပွောငျးအလဲ, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, နာမငြိမ်, ဆင်းရဲသောအာရုံစူးစိုက်မှု, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်လူမှုရေးသွက်ချာပါဒ, အပြင်ယောက်ျားတွေမခေါ်ကြောင်းလိင်စိတ်၏ရုတ်တရက်အရှုံး ကို 'flatline' ' (porn ဆုတ်ခွာရန်ပုံထူးခြားသော) ။ porn အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို၏အခြားသောနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုစိုက်ထူရဖို့သို့မဟုတ် porn မသုံးဘဲတစ်အော်ဂဇင်ရှိသည်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုများအဘို့အဖြစ်သာလေးရှိတယ် တိုက်ရိုက် ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအကြောင်းကို porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲမေးတယ်။ အားလုံး4ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်: 1, 2, 3. 4။ လေ့လာမှုသုံးခုအောက်တွင်ဖော်ပြနေကြသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်အထက်ဖော်ပြပါသည်းခံစိတ် / အရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းအပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်။ ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာ။ "သည်းခံ" နှင့် "ရုပ်သိမ်းရေး" နှစ်ဦးစလုံး၏ကြီးမားသောသက်သေအထောက်အထားမှာ-အန္တရာယ်အသုံးပြုသူများနှင့်အနိမ့်အန္တရာယ်အသုံးပြုသူများသည်၌တွေ့သောသတိပြုပါ။
ဒုတိယအချက်မှာတစ် 2018 စက္ကူပေါ်မှာအစီရင်ခံ တစ်အကြီးစားအမျိုးသားနမူနာအတူဘာဂန်-ယေးလ်လိင်စွဲလမ်းစကေး၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတည်ပြုခြင်း။ ဒါဟာအစရုပ်သိမ်းရေးနှင့်သည်းခံစိတ်အကဲဖြတ်။ အဆိုပါဘာသာရပ်များတွင်တွေ့မြင်အရှိဆုံးပျံ့နှံ့နေတဲ့ "လိင်စွဲလမ်း" အစိတ်အပိုင်းများ salience / တဏှာနှင့်သည်းခံစိတ်ရှိကြ၏, ဒါပေမယ့်ရုပ်သိမ်းရေးအပါအဝင်အခြားအစိတ်အပိုင်းများ, လည်းတက်ပြသခဲ့သည်။
အထက်တွင်ကိုးကားထားသည် - ပိုလန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားများအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏ပျံ့နှံ့မှု, ပုံစံများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ခံစားသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2019). လေ့လာမှုတွင် Prause ပြောဆိုချက်သည်မတည်ရှိပါ။ သည်းခံခြင်း / လေ့ကျင့်ခြင်း၊ အသုံးပြုမှုအရှိန်မြင့်လာခြင်း၊ လိင်မှုနှိုးဆွရန်ပိုမိုအစွန်းရောက်သောအမျိုးအစားများလိုအပ်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်သည့်အခါရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ၊ ညစ်ညမ်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၊ သည်းခံစိတ် / လေ့ကျင့်ခန်း / အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကောက်နုတ်ချက်အချို့ -
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုတောင် Non-စွဲ (စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများရဲ့အဓိပ္ပါယ်နိမိတ်လက္ခဏာ) တွင်, ချုပ်ရာအပေါ်သို့ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်:
အကြောင်းပြချက် Prause ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet သူမနှင့်သူမ၏အဖွဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့်၊ အနိမ့် သူမ၏ ၂၀၁၅ လေ့လာမှုတွင်အပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာများ - Prause et al ။ , 2015 ။
EEGs များသည် ဦး ရေပြားပေါ်တွင်လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု (သို့) ဦး နှောက်လှိုင်းများကိုတိုင်းတာသည်။ “ Enhanced နှောင်းပိုင်းတွင်အပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာများ” သည် EEG ဖတ်ချက်များဖြစ်ပြီးအကြောင်းအရာကိုမြင်တွေ့ရသည့်ရုပ်ပုံပြီးနောက်ချက်ချင်းတိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည် EEG မှအကဲဖြတ်သောလျှပ်စစ်လုပ်ဆောင်မှုတွင် spike များစွာအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သဘောတူလက်ခံထားသည်မှာ Prause ၏မကြာခဏ porn သုံးစွဲသူများတွင် EEG ဖတ်ရှုမှုနိမ့်ကျခြင်းသည် vanilla porn ၏ဓါတ်ပုံများကို porn နည်းနည်းသုံးသောဘာသာရပ်များထက်အာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ရိုးရှင်းစွာပျင်းခဲ့ကြသည်။ မလွဲမသွေ, Prause ရဲရင့်ပြောဆိုထားသည် "ဒီပုံစံပစ္စည်းဥစ္စာစွဲမော်ဒယ်များမှသည်ကွဲပြားခြားနားပုံပေါ်။ "
ဒါပေမယ့်ပိုပြီးမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများအတွက်နိမ့်ဦးနှောက်ကို Activation ၏ Prause ရဲ့တွေ့ရှိချက်အမှန်တကယ်စွဲမော်ဒယ်နှင့်အတူ aligns: ကညွှန်ပြ desensitization arousal အောင်မြင်ရန်ပိုမိုဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်သော (လေ့) နှင့်သည်းခံစိတ်။ ကိုး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများသဘောတူ Prause et al ။, 2015 အမှန်တကယ် desensitization / လေ့ (စွဲလမ်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကို) တွေ့ရှိရ:
ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေများအတွက် LPP လျော့နည်းသွားစွဲမော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အရာအားလုံး (အမော်ဒယ်ပေါ်မူတည် Commentary အပေါ် Prause et al ။ , 2015)
Prause သူမ၏ဘာသာရပ်များခဲ့မှန်ကန်သောခဲ့ကြသည်ရင်တောင် နည်းသော "cue-reactivity ကို" ထက်လေ့သူမကအဆင်ပြေသူမ၏ "မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု" အခိုင်အမာအတွက် gaping ပေါက်လျစ်လျူရှု: 26 သည်အခြားအာရုံကြောလေ့လာမှုများ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် cue-reactivity ကိုသို့မဟုတ်မတရားသော (မက်လုံးပေးာင်း) သတင်းပေးပို့ကြပြီ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23, 24, 25, 26, 27.
သိပ္ပံနည်းကျသဘောတူညီမှုသည်ကြီးမားသောနည်းစနစ်ဆိုင်ရာအားနည်းချက်များကြောင့်အတားအဆီးဖြစ်စေသောသီးခြားလေ့လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်၏ပြောဆိုချက်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ (သင်မဟုတ်လျှင်) သိပ္ပံနည်းကျသဘောတူညီမှုသည်သက်သေအထောက်အထား၏ကြွယ်ဝမှုအပေါ်တွင်မူတည်သည် အစီအစဉ်-မောင်းနှင်နေကြသည်).
ယင်းကိုတုံ့ပြန်ရန် Prause et al ။, 2017 "အချိုမှုဂီယာ" အနီရောင် Herring
PRAUSE et al: စွဲလမ်း၏အဓိက neurobiological အင်္ဂါရပ်နျူကလိယ accumbens အပေါ် synapse ကြောင့်အချိုမှုအာရုံခံ၏တိုးမြှင့်တုန့်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ cue-သွေးဆောင်တဏှာနှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပါအဝင်ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုအကွာအဝေးအားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်ဤပြောင်းလဲမှုများသည် mesocorticolimbic dopamine လမ်းကြောင်း၏ရေရှည်ာင်းအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်။3ယနေ့အထိ, အချိုမှု function ကိုနှင့် dopamine လမ်းကြောင်း၎င်း၏မော်ဂျူအပေါ်လိင်၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်သုတေသနပြုရှားပါးသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဒီ Prause အက္ခရာတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သလဲ အဆိုပါ: တိရိစ္ဆာန်သုတေသနဆယ်စုနှစ်များစွာစွဲ၏ရေပန်းစားသီအိုရီပုံသွင်းကြ စွဲလမ်း၏မက်လုံးပေး-sensitive မော်ဒယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသီအိုရီ၏နောက်ကွယ်၌ ဦး နှောက်၏ဗဟိုပြောင်းလဲမှုမှာအချိုမှုနဗ်ကြောများမှတစ်ဆင့် mesocorticolimbic dopamine ကိုကြာရှည်ခံစားသိရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အတော်ပင်အာသာငမ်းငမ်းဖြစ်စေသော်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် YBOP သည်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အတော်လေးရိုးရှင်းသောဆောင်းပါးကိုရေးသားခဲ့သည် (ပုံအနည်းငယ်နှင့်) - အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား? (2011) ။
ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် ဦး နှောက်တစ်လျှောက်လုံးမှအတွေးများ၊ ခံစားချက်များနှင့်အမှတ်တရများကိုအချိုမှုန့်ထုတ်လွှတ်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်သို့ပေးပို့သည်။ စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူဤအချိုမှုလမ်းကြောင်းများသည်အလွန်အစွမ်းထက်သော၊ ဤရွေ့ကား sensitized လမ်းကြောင်း အဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ် Pavlovian အေးစက် Turbo ပေါ်မှာ။ တို့က activated လိုက်တဲ့အခါ အတှေးအသို့မဟုတ်အစပျိုးခြင်း, sensitized လမ်းကြောင်းခက်ခဲ-to-လျစ်လျူရှုမတရားသောတက်ပစ်ခတ်, အကျိုးကို circuit ကိုဗုံး။
ဒါပေမယ့်ဒီမှာစာချုပ်ပါ အာရုံကြောသိပ္ပံအခြေပြုလေ့လာမှု ၂၄ ခုရှိပြီး ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်မှုပုံစံများနှင့် CSB ဘာသာရပ်များနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအားထိတွေ့မှုကိုပြသနိုင်သည့် cue-induced cravings များကိုသတင်းပို့သည်။ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့ဘာသာရပ်များတွင်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောအလွန်တန်ဖိုးကြီးပြီးဘာသာပြန်ရန်ခက်ခဲသော“ glutamate လေ့လာမှုများ” ကိုကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်ပါ။
တုံ့ပြန်ရန် Prause et al ။, 2017 "supraphysiological ဆွ" အနီရောင် Herring
PRAUSE et al: လိင်ထူးခြားတဲ့ရံကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အတူတစ်မူလတန်းချသောဆုဖြစ်၏။ လိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပြုသဘောကျန်းမာရေးနှင့်ဘဝကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လိင် supraphysiological ဆွဘို့အခွင့်မပြုပါဘူး။
Prause compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါပတျဝနျးကငျြအငြင်းအခုန်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှိခြင်းနှစ်ခုအနီရောင် herrings နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရမယ်။
အနီရောင် herring #1: "လိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပြုသဘောကျန်းမာရေးနှင့်ဘဝကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်"။
မြားတှငျပါဝငျခွငျးနေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း မကြာခဏပိုမိုကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းမှု၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်အခြားလိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း (“ လိင်” ဟူသောဝေါဟာရသည်မရေမရာ၊ သိပ္ပံနည်းကျမဟုတ်သောအသုံးအနှုန်းနှင့်မသုံးသင့်ပါ) တစ် ဦး ပညာသင်နှစ်ဂျာနယ်ထဲမှာဖမ်း - အားလုံး) ။
ဒါခေါ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများပထမဦးစွာများစွာသော ပြောဆိုထားသည် အော်ဂဇင်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (သို့)“ လိင်” နှင့်ဆက်နွယ်မှုသည်အမှန်တကယ်တွင်အခြားလူသားတစ် ဦး နှင့်နီးကပ်စွာအဆက်အသွယ်ရှိခြင်း၊ မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူ။ ပိုများသောအထူးအနည်းငယ်အထီးကျန်ကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြားဆက်စပ်မှုဖြစ်ကောင်းသဘာဝကျကျပိုပြီးလိင်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကိုကျန်းမာသန်စွမ်းလူဦးရေကနေဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်ပြောဆိုထားသည်။ သူတို့ကကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ကြသည်မဟုတ်။
စာပေအထူးသ, ဒီသုံးသပ်ချက်ကို (ကွဲပြားခြားနားသောလိင်လှုပ်ရှားမှုများ၏ဆွေမျိုးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ, 2010) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမဟုတ်ခဲ့စဉ်လိင်ဆက်ဆံခြင်း, အပြုသဘောသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုအဆိုးဆက်စပ်ခဲ့ - ကိုပိုမိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဆင်းရဲတဲ့ကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းဆက်နွယ်နေကြောင်းအဓိပ္ပာယ်။ ပြန်လည်သုံးသပ်၏နိဂုံး:
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် Prause ကလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသဖြင့်လိင်စွဲလမ်းမှုမရှိနိုင်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းသည်အစာစားခြင်းသည်အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းနှင့်သေခြင်းကိုတားဆီးသောကြောင့်အမှိုက်များကိုစားခြင်းသည်ပြnoနာမရှိကြောင်းပြောခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ ယနေ့သုံးစွဲမှုအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှု၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ မြင့်မားသောအဆီ / သကြားအစားအစာများ မဟုတ်ရင်ပြောကြပါတယ်။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုမအဖြစ် အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမေရိကန်များ၏ 39% အဝလွန်ဖြစ်ကြပြီး 75% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအဝလွန်နေကြသည်။ ထို့အပြင်ရာပေါင်းများစွာ၏ လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ junk အစားအစာလုပ်နိုင်တဲ့၏ overconsumption နိုင်သောအခိုင်အမာထောက်ခံရန် စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများဆင်တူနည်းလမ်းတွေထဲမှာဦးနှောက်ပြောင်းလဲ.
အနီရောင် herring #2: "လိင် supraphysiological ဆွဘို့အခွင့်မပြုပါဘူး".
လူများသာလျှင်လက်တဆုပ်စာကွောငျးသိရမယ်လို့ Prause et al။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာအယူအဆကိုပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုတ်ချဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ပူးတွဲစာရေးသူများက“ suprafysiological stimulation” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းကြောင့်နိုဘယ်ဆုရှင်သည်သူတို့မသိကြောင်းရှင်းနေပါသည်။ Nikolaas Tinbergen သူကဟူသောဝေါဟာရကိုစတင်သောအခါ "ဆိုလို။supernormal နှိုးဆွ '' (သို့မဟုတ် supranormal) ။
ပထမ ဦး စွာထိုကဲ့သို့သော dopamine သို့မဟုတ် endogenous opioids ကဲ့သို့သော neurotransmitters ၏ supraphysiological အဆင့်ဆင့်, စွဲ -related ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကိုသွေးဆောင်ဖို့နာတာရှည်အသုံးပြုမှုအတွက်မလိုအပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးစွဲစွဲလမ်းမှုအများဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်မျိုး (ဆိုလိုသည်မှာသုံးစွဲသူများကိုအများဆုံးဖမ်းယူနိုင်သည့်ဆေးများဖြစ်သည်) - နီကိုတင်းနှင့်ဘိန်းပါသော - ဆုပေးစင်တာ dopamine ကို ၂၀၀% တိုးစေပါသည်။ ၎င်းသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုတွင်တွေ့ရသည့် dopamine အဆင့်များ (လိင်နှင့်အော်ဂဇင်များသည်သဘာဝအရရရှိနိုင်သော dopamine နှင့် endogenous opioids ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးဖြစ်သည်) ။
ထိုမှတပါး, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးကိုသက်ဝင် တူညီတဲ့ဆုလာဘ် circuit ကိုအာရုံကြောဆဲလ်တွေကိုတောင်း။ ဆနျ့ကငျြ, သာတစ်ဦးရှိပါတယ် သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာသို့မဟုတ်ရေကဲ့သို့အခြားသဘာဝကဆုလာဘ်များအကြားအာရုံကြောဆဲလ် activation-ထပ်တူ၏။ ဆိုတဲ့အချက်ကို meth, ကိုကင်းများနှင့် ဘိန်းဖြူ စေတူညီတဲ့အာရုံကြောဆဲလ်တွေကိုဖွင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဒါဆွဲဆောင်မှု သူတို့ဒါကြောင့်စွဲလမ်းစေနိုင်ပါတယ်ရှင်းပြကူညီပေးသည်။
သုတေသနက "supraphysiological ဆွ" စွဲဘို့မလိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ သုတေသနတောင်တန်းများကအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြသည် (အစားအသောက်စွဲလမ်း, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, ဗီဒီယိုကဂိမ်းကစားခြင်း, အင်တာနက်စွဲ နှင့် porn စွဲ) နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုတူညီသောများစွာကိုဝေမျှ အခြေခံယန္တရား တစ်ဦးမှဦးဆောင် shared ပွောငျးလဲ၏စုဆောင်းမှု ဦးနှောက်ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဓာတုဗေဒ၌တည်၏။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ကသိသာရှိသည်: အဆိုပါ DSM5 နှင့် ICD-11 နှစ်ဦးစလုံးအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်။ အသစ်ကနေစဉ်တွင်အဆိုပါ DSM5 (2013), လောင်းကစားဝိုင်းစွဲများအတွက်ရောဂါပါရှိသည် ICD-11 (2018) လောင်းကစားစွဲအဖြစ် video-game ထဲကစွဲလမ်းများအတွက် diagnoses ရှိပြီး, တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပါရှိသည် porn စွဲသို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်းများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "
၏ဒုတိယ, စာရေးဆရာများ Prause et al ။ ဆိုလိုသောအရာကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည် supernormal လှုံ့ဆော်မှု (မှားယွင်းစွာ "supraphysiological ဆွ" ကတောင်းဆို) ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောနားလည်မှုအတွက်ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည် ဟားဗတ်ပါမောက္ခအားဖြင့်တိုတောင်းသောဆောင်းပါးသို့မဟုတ်ဤအလွန်လူကြိုက်များ စတူးဝပ် McMillen နေဖြင့်ရုပ်ပြရှင်းပြချက်။ Prause နှင့်ကုမ္ပဏီတို့သည်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖွင့်နိုင်သည် Supernormal လှုံ့ဆော်မှု: တိုကျတှနျးထားသူတို့၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိမျးဘယ်လို Primal by Deirdre Barrett။ စာအုပ်၏ ၂၀၁၀ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှကောက်နုတ်ချက် -
ယခုကျွန်ုပ်တို့သကြားလုံးမှအပြာစာပေများအထိအနုမြူဗုံးများအထိသဘာ ၀ ထက်ပိုမိုကြီးမားသောသွေးဆောင်မှုများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ခေတ်နောက်ကျသော်လည်းဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသောအလိုလိုမောင်းနှင်မှုများကိုအန္တရာယ်ရှိသည့်ရလဒ်များဖြင့်ရရှိစေသည်။ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ဒတ်ခ်ျနိုဘယ်လ်ဆုရှင်နီကိုတန်ဘာဂင်ကအဖြူရောင်နှင့်အနီများသောအဖြူရောင်ညက်ညက်နေသောငှက်များသည်ကြီးမားသောတောက်ပသောအပြာရောင်အပြောက်အပြောက်များပါသောအင်္ဂတေအကောင်လေးများတွင်ထိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငွေအ ၀ တ်လျှော်ထားသော fritillary လိပ်ပြာသည်အလျားလိုက်အညိုရောင်အစင်းများပါ ၀ င်သည့်လိပ်ပြာအရွယ်အလှည့်ဆလင်ဒါဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခြင်းခံရသည်။ မိခင်ငှက်များသည် Tinbergen ၏ကျောင်းသားများကတုတ်ချောင်းထဲ၌ကလေးငယ်သစ်တုတ်ကိုအတုလုပ်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ အကယ်၍ Dummy Beak ကကြက်ထက်အမှန်တကယ်ကြက်ထက် ပို၍ ကျယ်ပြီး ပို၍ နီသည်ဆိုပါစို့။ stickleback ငါးအထီးသည်အမှန်တကယ်အထီးကိုလျစ်လျူရှုကာ၎င်း၏အောက်ပိုင်းသည်သဘာဝငါးများထက်ပိုမိုအနီရောင်ရှိပါက Dummy ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်သည်။ Tinbergen သည်ပင်ကိုစရိုက်လက္ခဏာများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်၎င်းတုပပုံများကိုဖော်ပြရန်“ Supernormal stimuli” ဟူသောဝေါဟာရကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည် - စူပါသကြားအချိုရည်များ၊ ပြင်သစ်ကြော်၊ ကြီးမားသောမျက်လုံးအစုံတိရိစ္ဆာန်များ၊
တစ်ဦးက supernormal လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်မထားဘူး supra-ဇီဝကမ္မ တုံ့ပြန်ချက်။ အဲဒီအစား, ကတိရစ္ဆာန်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အတူတူပင်ဆွဲဆောင်မှုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပုံကြီးချဲ့ (ဖြစ်ကောင်းဒြပ်) ဗားရှင်းကိုရှာဖွေပြောင်းလဲသောအရာကိုအကြားတစ်ဦးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပျေါမှာအခြေခံသည်။ အမျိုးသမီးငှက်, ဥပမာအားဖြင့်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဖြူဖပ်ဖြူရော, dappled ကြက်ဥ untended ပျောက်ပျက်နေချိန်မှာ Tinbergen ရဲ့ပိုကြီးတဲ့-ထက်အသက်, ကှကျကှကျကှငျးကှငျးကျားအင်္ဂတေကြက်ဥပေါ်ထိုင်ဖို့ရုန်းကန်။
ဒါဟာအဆုံးမဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းကိုထောက်ပံ့ပေးနေသောကြောင့်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းတဲ့ supernormal နှိုးဆွစဉ်းစားသည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူပြုလုပ်ရုံချိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ဘူး သစ်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်ကအသံမြည်မယ်။ အကျိုးကို system ကိုတက်သည်မီး သည်အခြားစိတ်ခံစားမှုများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများလွန်း, အရာရှိသမျှတို့ကိုမကြာခဏကြည့်ရှုအတွက်အဓိက feature:
အားကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှု - ကဲ့သို့ ဒုစရိုက်ဖြေ, ရွံရှာ, အရှက်, စိုးရိမ်ခြင်း & ကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောသည်
ဖို့မရှာ နှင့်ရှာဖွေ - အကျိုးကို circuit ကိုမကြာခဏဟုခေါ်သည် အဆိုပါရှာ circuit ကို
တခုခု ထို မျှော်လင့်ချက်များချိုးဖောက် - ထိတ်လန့်, အံ့သြစရာ, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးနိုင်ထက် ပို.
ခေါ်ဆောင်သွားစကားလုံးများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာလှည့်ပတ်ခဲ့ကြပြီ။ ဒီတော့ရှိပါတယ် ဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက်ထံမှ neurochemical အလုအယက်။ ဒါပေမဲ့တခါ-a-လအသစ်အဆန်း Playboy အဖြစ်မကြာမီသင်စာမကျြနှာကိုဖွင့်အဖြစ်အငွေ့ပျံ။ မည်သူမဆိုခေါ်ဆိုခလို Playboy သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများ "ထိတ်လန်" သို့မဟုတ် "စိုးရိမ်ပူပန်ထုတ်လုပ်?" softcore 12 အသက်ကျော်နေတဲ့ကွန်ပျူတာ-စာတတ်မြောက်သူငယျ၏မျှော်လင့်ချက်များဖြစ်စေချိုးဖောက်မလား? သည် "ရှာဖွေနေနှင့်ရှာကြံ" ဟုမျိုးစုံ-tab ကို Google က porn ပါ၏၏တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မရှိ။ အဘယ်အရာကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမူထူးခြားတဲ့စေသည်သင်သည်သင်၏ dopamine (နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ) သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်ဆိုတာပါပဲမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမောက်စ်သို့မဟုတ်ထိပုတ်ပါ၏ကလစ်အတူတက် jacked ။
ဤအတူညီစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, အရှက်ကွဲခြင်း, ထိတ်လန့်, အံ့သြစရာ) မသာ၏အတော်များများက dopamine ခြီးမွှောဒါပေမယ့်အသီးအသီးလည်းစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းနှင့် neurotransmitters (norepinephrine, epinephrine, cortisol) မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစိတ်ဖိစီးမှု neurochemicals စိတ်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့် စဉ်တွင် ချဲ့ dopamine ရဲ့ ပြီးသားအစွမ်းထက်ဆိုးကျိုးများ။ သည်အခြားအလားအလာစွဲလမ်းတ္ထုများနှင့်အပြုအမူအနေဖြင့်ဆိတ်ကွယ်ရာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသတ်မှတ်ထားသောအခြားအရည်အသွေးတွေ:
လေ့လာရေးကဗီဒီယိုညစ်ညမ်းကြောင်းထုတ်ဖေါ် ငြိမ် porn ထက်ပို arousal.
လိင်စိတ်နိုးထတိုးမြှင့် (နှင့်ကျဆင်းနေ dopamine မြှင့်) ကိုတဦးတည်းချက်ချင်းတစ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ session တစ်ခုအတွင်းမှာအမျိုးအစားများပြောင်းလဲနိုင်သည်။ 2006 နှင့်များ၏မရောက်မီကြောင့်မလုပ်ပေးနိုင်တော့ပါ streaming များပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ.
အဝတ်အချည်းစည်းလူများ၏ဓာတ်ပုံများနှင့်မတူဘဲ, ဗွီဒီယိုများသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအစားထိုး, သင်၏ပုံဖော်စေခြင်းငှါ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ, အပြုအမူ, ဒါမှမဟုတ်ဒုံးကျည်သွားလမ်း (အထူးသဖြင့်ဒါ မြီးကောင်ပေါက်အဘို့).
porn ကိုသင်အချိန်မရွေးသင်တစ်ဦးလိုအပ်ပါကမှတ်မိဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည် "hit ။ "
အစားအစာနှင့်စားသုံးမှုဖို့ကန့်သတ်လည်းမရှိရာများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး, မတူဘဲ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ တဦးတည်းထှတျအထိပျမဟုတ်လျှင်ဦးနှောက်၏သဘာဝ satiation ယန္တရားများ, activated ကြသည်မဟုတ်။ တောင်မှဖြစ်လျှင်, အသုံးပြုသူကိုထပ်နှိုးဆွဖြစ်လာဖို့ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ်။
အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူတဦးတည်းကိုသာပိုမိုစားသုံးခြင်းဖြင့် (တစ်ဦးစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးအမှတ်အသား) မြင့်လာနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူနောက်ထပ်တ္ထု "မိတ်ဖက်" နဲ့နှစ်ဦးစလုံးတင်းမာမှုများလျော့ပါးစေရန်နိုင်ပါတယ် နှင့် အသစ်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအမျိုးအစားများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်။ ဒါဟာညစ်ညမ်းတဲ့သူအတွက်အတော်လေးအသုံးများတယ် အစဉ်မပြတ်အစွန်းရောက် porn ပြောင်းရွှေ့ဖို့။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးကိုလည်းစုစည်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်သို့မဟုတ် VR porn ကို အသုံးပြု. မြင့်လာနိုင်ပါတယ်။
မြင့်မားအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ (အာရုံစိုက်ကြား / အဆီ / ဆား), ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း supernormal လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။ ဤတွင် supernormal လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အင်တာနက် applications များ (porn, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကို Facebook က) ရှာဖွေစူးစမ်းအနည်းငယ် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများနေသောခေါင်းစဉ်:
1) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
တချို့ကအင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများကြောင့်ချိုးဆွ (နှင့်အကျိုးကိုစနစ်၏ activation) ကယ်နှုတ်တော်မူ၎င်းတို့၏အာဏာ [supernormal လှုံ့ဆော်မှုဖွဲ့စည်းမှထင်နေကြတယ်24] အဘယ်သူ၏ဦးနှောက်တို့အားထငျရှားစစွဲ-related အပြောင်းအလဲများကိုမိမိတို့၏ရောဂါဗေဒလိုက်စားအတွက်ဖမ်းမိရအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသူများကိုရှင်းပြဖို့ကူညီပေးသည်ရာ။ သိပ္ပံပညာရှင် Nikolaas Tinbergen အနိုင်ရနိုဘယ်ဆု  အတုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု evolutionarily ဖွံ့ဖြိုးပြီးမျိုးဗီဇတုံ့ပြန်မှု override လိမ့်မည်ဟုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်သောဖြစ်ရပ်ဆန်း "supernormal လှုံ့ဆော်မှု" ၏စိတ်ကူး posited ။ ဒီဖြစ်စဉ်သရုပျဖျောဖို့, Tinbergen အမှန်တကယ်ငှက်ကြက်ဥထက်ပိုကြီးပြီးပိုပြီးရောင်စုံကွအတုငှက်ဥများကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကမိခင်ငှက်တို့သည်ပိုမိုတက်ကြွအတုကြက်ဥပေါ်မှာထိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝကျကျထားကြ၏ကြက်ဥစွန့်ခွာရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အလားတူပင် Tinbergen ပိုကြီးပြီးပိုရောင်စုံအတောင်ပံနှင့်အတူအတုလိပ်ပြာ created နှင့်အထီးလိပ်ပြာထပ်တလဲလဲအမှန်တကယ်အမျိုးသမီးလိပ်ပြာအစားတွင်ဤအတုလိပ်ပြာနှင့်အတူမိတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိတ်ပညာရှင် Dierdre Barrett သူမ၏မကြာသေးမီစာအုပ် Supernormal လှုံ့ဆော်မှု၌ဤအယူအဆချီ: တိုကျတှနျးထားသူတို့၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိမျးဘယ်လို Primal  ။ စမ်းသပ်ဆဲသူတို့ကိုတည်ဆောက်သည့်အခါ "တိရစ္ဆာန်များအများအားဖြင့် supernormal လှုံ့ဆော်မှုကြုံတွေ့ရ။ ကျနော်တို့လူသားမြားသညျကြှနျုပျတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ " (စ။ 4) ။ Barrett ရဲ့ဥပမာသကြားလုံးကနေညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းဆားသို့မဟုတ်သဘာဝဒူ junk အစားအစာမှအလွန်အမင်းဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဗီဒီယိုဂိမ်းကစားအထိ။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်တာနက်နာတာရှည်သုံးရင်အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ [ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝကဆုလာဘ်စနစ်အားစုဆောင်းလေ့ကျင့်ပေမယ့်အလားအလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ပြောင်းလဲသောကြောင့်ဘိုးဘေးပုံမှန်အားဖြင့်ကြုံတွေ့ activation ၏အဆင့်ဆင့်ထက်ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်မှာမြှင့်လုပ်ဆောင်ပါကထိုက်တစ်ခုစွဲလမ်း mode သို့ပြောင်းလဲအောင်27].
2) သဘာဝဆုလာဘ်ကျော် Supernormal များအတွက်ဦးစားပေးမှုတိုင်းတာခြင်း: တစ်ဦးနှစ်ဦး-Dimensional Anticipatory ပျော်ရွှင်မှုစကေး (2015) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
Supernormal (SN) လှုံ့ဆော်မှုကိုပိုမိုဒါသဘာဝကဤစနစ်များကိုရည်ရွယ်ခဲ့ပြီးသောအဘို့အလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပေါ်ထက်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းများနှင့်ချဉ်းကပ်အပြုအမူကိုသက်ဝင်သည်ဟုအတုထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ အတော်များများခေတ်မီစားသုံးသူထုတ်ကုန် (ဥပမာရေစာအစားအစာများ, အရက်, နှင့်ညစ်ညမ်း) preference ကိုသဘာဝကျကျအခြားနည်းလမ်းဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အလွန်အကျွံစားသုံးမှုမှဦးဆောင် SN features တွေထည့်သွင်းဖို့ပေါ်လာပါသည်။ အဘယ်သူမျှမတိုင်းတာသည်လက်ရှိထိုကဲ့သို့လှုံ့ဆော်မှုဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများကို၏ Self-အစီရင်ခံစာအကဲဖြတ်ဘို့တည်ရှိ။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦး anticipatory အပျော်အပါးစကေး SN နှင့်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများ၏သဘာဝအလျောက် (N) တို့အတန်းနှစ်မျိုးလုံးကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းပစ္စည်းများထည့်သွင်းရန်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်ဦးနှစ်ဦး-Factor ဖြေရှင်းချက်လြှော့နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသီးခြားရှုထောင့်အပေါ် loaded ဟောကိန်းထုတ်, N နှင့် SN ပစ္စည်းများအဖြစ်။ နှစ်ခုအကြေးခွံများအတွက် internal ယုံကြည်စိတ်ချရအသီးသီးမြင့်မားခဲ့ρ = .93 နှင့်ρ = .90 ။ နှစ်ခုရှုထောင်အတိုင်းအရှည် N နှင့် SN စကေးသုံးပြီးဆုတ်ယုတ်မှတဆင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ရလဒ်များအဖြစ် SN features တွေနှင့်အတူ 21 ထုတ်ကုန်များ၏နေ့စဉ်စားသုံးမှု Self-အစီရင်ခံစာများအဖြစ်ကိုဆိုလိုသည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း N ကိုပျော်မွေ့ ratings ထိုထုတ်ကုန်၏စားသုံးမှုမှအနုတ်လက္ခဏာသို့မဟုတ်ကြားနေဖြစ်စေအသင်းအဖွဲ့များခဲ့စဉ် SN အပျော်အပါး ratings မြင့် SN ထုတ်ကုန်စားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ရရှိလာတဲ့ Two-ရှုထောင်အတိုင်းအတာ SN လှုံ့ဆော်မှုများအတွက် differential ကိုဦးစားပေးတစ်ဦးအလားအလာယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တရားဝင် Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာကြောင်းကောက်ချက်ချ။ နောက်ထပ်အကဲဖြတ် (ဥပမာစမ်းသပ်ဆောင်ရွက်မှုများကိုသုံးပြီး) လိုအပ်နေချိန်မှာ, အဆိုပြုထားစကေး trait- နှင့် SN လှုံ့ဆော်မှုမှလူ့လွယ်ကူစွာထိခိုက်အတွက်ပြည်နယ်-based အပြောင်းအလဲနှစ်ဦးစလုံး၏လေ့လာမှုအတွက်အသုံးဝင်သောအခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။
လုပ်ငန်းများ၌အစားအစာ, psychoactive တ္ထုများ, အခြို့လက်လီကုန်စည်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောလူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းထုတ်ကုန်အလွယ်တကူ (မြောက်မြားစွာသောလူဦးရေကနျြးမာရေးစိန်ခေါ်မှုများတင်ဆက်ထားပါတယ်, overconsumed နေကြတယ်ရောဘတ်, ဗန် Vught, & Dunbar က, 2012) ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိတ်ပညာအလွန်အကျွံစားသုံးမှု၏ဖြားယောင်းရှင်းပြချက်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သောအားဖြင့်မိမိတို့အ utility ကိုပိုကောင်းအောင်သောလူသားမြားအပါအဝငျတိရစ္ဆာန်များ, (ဆိုလိုသည်မှာစုဆည်းပူးနှင့်လောင်) ချဉ်းကပ်လေ့သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်အမြင့်ဆုံးဆွေမျိုးဆုလာဘ်များကိုလှုံ့ဆော်မှု, (Chakravarthy & Booth, 2004; Kacelnik & Bateson, 1996) ။ အာရုံကြောဆုလာဘ်ယန္တရားများထိုကဲ့သို့သောအာဟာရသို့မဟုတ်မျိုးပွားမှုအခွင့်အလမ်းများပေးအဖြစ်ကြံ့ခိုင်ရေးမြှင့်တင်ရန်၏အချက်ပြပေးပို့ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှု, အားဖြည့်ခြင်းဖြင့်သပ္ပါယ်အပြုအမူမြှင့်တင်ရန်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ Tinbergen (1948) တိရိစ္ဆာန်များကသဘာဝလှုံ့ဆော်မှု၏ပုံကြီးချဲ့ဗားရှင်းမြင့်တုံ့ပြန်မှုပြလေ့ကြောင်းရှာဖွေတာပေါ်မှာဝေါဟာရကို "Supernormal stimulus" ခဲ့ကြသည်။ ဤ "ရွေးချယ်ရေး asymmetry" (Staddon, 1975; ရပ်ကွက်, 2013) ကိုနှိုးဆွ၏ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများဗားရှင်းရှားပါးပေမယ့်များမှာအတုနှင့်အပုံကြီးချဲ့အခြားနည်းလမ်းတည်ရှိသည့်အခါပြဿနာများတင်ဆက်ထားတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာ maladaptive မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, အသစ်ပေါက် herring gull တစ်ဦးက၎င်း၏အစွန်အဖျားမှာအဖြူနှင့်သူရဲများလုပ်ကြံပါးလွှာအနီရောင်လှံတံကိုထက်က၎င်း၏မိခင်ရဲ့သဘာဝအတိုင်းအနီရောင်ကျားပိန်နှုတ်သီး (အနည်းဆုံး Peck မှကြိုက်နှစ်သက်သည်Tinbergen & Perdeck, 1951) ။ သယံဇာတထောက်ပံ့ရေးရှားပါးသို့မဟုတ်စိတ်မချရသည်အဘယ်မှာရှိသည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုသပ္ပါယ်မဟာဗျူဟာ: သယံဇာတရွေးချယ်ရေး၏ဆက်စပ်များတွင်ရလဒ် "သင်တတ်နိုင်သမျှအားလုံးရ" ၏တစ်ဦးအမူအကျင့် heuristic ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့များစွာသောအလွန်အမင်းကြိုးအတွေ့အကြုံများ supernormal ဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်မွမ်းမံခဲ့ကြကြောင်းအတုစားသုံးသူထုတ်ကုန်များ၏ပုံစံမတည်ရှိ။ အဲဒီ (သူတို့ကသဘာဝလှုံ့ဆော်မှုများတွင်မတွေ့ရှိမယ့်ဒီဂရီတစ်ခုအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာဆုလာဘ် system ကိုလှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါသည်Barrett, 2010) ။ ဥပမာအားဖြင့်, psychoactive တ္ထုများ (Nesse & Berridge, 1997), စီးပွားဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းအစားအစာထုတ်ကုန် (Barrett, 2007), လောင်းကစားဝိုင်းထုတ်ကုန် (Rockloff, 2014), ရုပ်မြင်သံကြားရှိုး (Barrett, 2010; Derrick, Gabriel, & Hugenberg, 2009), ဒစ်ဂျစ်တယ်လူမှုကွန်ရက်များနှင့်အင်တာနက်ကို (Rocci, 2013; ရပ်ကွက်, 2013), နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစျေးကြီးကားများအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလက်လီထုတ်ကုန်, (Erk, Spitzer, Wunderlich, Galley, & Walter, 2002), မြင့်မားသောဒေါက်ဖိနပ် (မောရစ်, အဖြူ, Morrison, & Fisher က, 2013), အလှကုန် (Etcoff, စတော့အိတ်, Haley, Vickery, & အိမ်, 2011), နှင့်သားသမီးရဲ့ကစားစရာအရုပ် (မောရစ်, Reddy, & Bunting, 1995) အားလုံးခေတ်သစ်နေ့ရက်ကို supernormal လှုံ့ဆော်မှုများ၏ပုံစံများအဖြစ်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဤအလှုံ့ဆော်မှုအချို့အဘို့, အာရုံကြောသက်သေအထောက်အထားများအားဖြင့်ပိုလျှံစားသုံးမှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အချို့သောကိစ္စများတွင်သဘာဝဆုလာဘ်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအကျိုးကိုတုံ့ပြန်မှုအပိုင်စီး, သူတို့ကအပြင်းအထန် dopamine လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်လေ့ကြောင်းပြသထားပါတယ်, စွဲလမ်း (Barrett, 2010; Blumenthal & ရွှေ, 2010; ဝမ် et al ။ , 2001).
ကွဲပြားဒီဂရီ, supernormal လှုံ့ဆော်မှုကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ High-ကယ်လိုရီ takeaway အစားအစာများနှင့်မုန်, အရက်၏အဆိပ်အတောက်များနှင့်အခြားတ္ထုများ, ရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်မှာပါဝင်နေတဲ့အထိုင်များလှုပ်ရှားမှု, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းထုတ်ကုန်သုံးပြီးနှင့်လက်လီပစ္စည်းများသို့မဟုတ်လောင်းကစားများ၏ကုန်ကျစရိတ်များ၏အဆင်သင့်ရရှိနိုင်မှု, အားလုံးအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်များကိုအစေခံ ကြောင်း (ပျက်ဆီးဖို့ဦးဆောင်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အမူအကျင့်ရွေးချယ်မှုလှုံ့Barrett, 2007, 2010; Birch, 1999; Hantula, 2003; ရပ်ကွက်, 2013) ။ ဒါဟာခေတ်သစ်လူသား၏လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏လေ့လာမှုလက်တွေ့ကျတဲ့အရေးပါမှု၏လှုံ့ဆော်မှု supernormal မှစေသည်။ လက်ရှိအစီရင်ခံစာအတွက်ကျနော်တို့အချိုးမညီ selection (ပိုမိုပြင်းထန်သောမျိုးကွဲဖို့ထိန်းအကွပ်မဲ့ချဉ်းကပ်မှု) ကသွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာသူတွေဟာပေါများဖန်ဆင်းခံရသည်ဟုခေတ်သစ်လူ့ထုတ်ကုန်များနှင့်အတွေ့အကြုံများရည်ညွှန်းဖို့အသုံးအနှုန်း supernormal လှုံ့ဆော်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ ထိုထုတ်ကုန်မကြာခဏလုပ်ငန်းများ၌မွမ်းမံ, ဒါမှမဟုတ်ရေစာအစားအစာများသို့မဟုတ်တ္ထုများအပါအဝင်လူသုံးကုန်ဖန်တီးနေကြသည်။ သိပ်မထင်ရှားတဲ့ဥပမာလူမှုရေးမီဒီယာကနေတဆင့်လက်ခံရရှိမက်ဆေ့ခ်ျများပါဝင်သည်။ မျက်နှာ-to-မျက်နှာစကားပြောဆိုမှုထက်အဆမှာလျော့နည်းလှုံ့ဆော်ပေမယ့်, ဒီဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းကြာရှည်တိုးမြှင်အမြင်အာရုံ, အမြန်နှုန်းနှင့်ဖြန့်ဝေဝိသေသလက္ခဏာများပေးပါသည်။ အလားတူပင်အများဆုံးခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုအဝတ်အစားများနှင့်အခြားလက်လီထုတ်ကုန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းအဘို့အလက်ထောက်ဂယက်နှင့်အတူရှားပါးသို့မဟုတ်လိုလားအလားတူတိုးမြှင် signifiers ပြ။ ထိုထုတ်ကုန်၏စားသုံးမှုသို့မဟုတ်ဝယ်ယူကြောင့်ကြံ့ခိုင်ရေးကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခံရခြင်းမှချက်ချင်းဆုလာဘ်များကိုဆိုခဲ့သည်။
ဒါဟာ supernormal ဆုလာဘ်တစ်ခု preference ကို dopamine လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ကွဲပြားမှု၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Dopamine ချို့တဲ့ (အရက်အလွဲသုံးစားမှု, Bing စား, ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်း, နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းအပါအဝင်ပိုလျှံစားသုံးမှုအမျိုးမျိုးသောပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ကိုတွေ့ထားပြီBergh, Eklund, Södersten, & Nordin, 1997; Blum, Cull, Braverman, & Comings, 1996; ဂျွန်ဆင် & Kenny, 2010; ကင်မ် et al ။ , 2011) ။ supernormal လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏အယူအဆမှာ dopamine လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးအနက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ Dopaminergic တဲ့ resource-ရှားပါးပတ်ဝန်းကျင်တွင်သဘာဝသယံဇာတဝယ်ယူခြင်းနှင့်စားသုံးမှုဦးစားပေးလုပ်ဖို့ပြောင်းလဲလမ်းကြောင်း, psychoactive တ္ထုများမှအထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံဖြစ်များပါတယ်, စွမ်းအင်သိပ်သည်းအစားအစာ, နှင့်ပုံကြီးချဲ့ဆုလာဘ်ဂုဏ်သတ္တိများပြသည်အခြားခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုစားသုံးသူထုတ်ကုန် (Barrett, 2010; Nesse & Berridge, 1997; ဝမ် et al ။ , 2001) ။ ဒီအမှုဖြစ်လျှင်, ထို့နောက် Two-ရှုထောင် NPS / SNPS ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထား dopamine ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီခွဲခြားဖို့မျှော်လင့်ထားမည်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်သုတေသနလည်းစီးပွားဖြစ်ဖော်ပြချက်ဤနှစ်ခုအဆင့်ဆင့်အကြားသက်ဆိုင်ရာအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက် Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာနှင့် တွဲဖက်. neurophysiological နည်းစနစ် employ ပေလိမ့်မည်။
Supernormal အတွေ့အကြုံများကြောင့်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းများ၌ဝိသေသလက္ခဏာများမှပိုလျှံစားသုံးမှုမှမူလကပင်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အာမင်များမှာ (ဥပမာ, မုန်နှင့်အစားအစာများကိုပယ်ရှား) နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအထိုင်များအပြုအမူ (ဥပမာ, လူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်း) အားပေးအားမြှောက်။ ထို့ကြောင့်, ဆုလာဘ်ဤအမျိုးအစားများကိုပိုနှစ်သက်သူကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်စွမ်း, သုတေသနပြုကုသနှင့်စားသုံးမှုကျော်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လူဦးရေကျန်းမာရေးပြဿနာများတားဆီးသူတွေကိုတစ်ဦးအဖိုးတန်တဲ့ contribution ပေးပါသည်။
3) ညစ်ညမ်းစွဲ - neuroplasticity (2013) ၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့် supranormal လှုံ့ဆော်မှု - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ညစ်ညမ်း၏စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးအသုံးပြုမှုအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (CSBs), ရန်လျှောက်ထားသောအခါအစွဲနေတဲ့ကှဲသက်တမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ mesolimbic dopaminergic ဆုလာဘ်စနစ်များ၏ function ကိုတစ်ခုတိုးလာနားလည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးသဘာဝအလျောက်ဒါမှမဟုတ် process ကိုစှဲ၏တည်ရှိမှုတစ်ခုကြီးထွားလာလက်ခံမှုနေသော်လည်းအလားအလာစွဲလမ်းအဖြစ် CSBs တံဆိပ်ကပ်ဖို့နှုတ်ဆိတ်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိခဲ့သည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (PG) နှင့်အဝလွန်ခြင်းအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလေ့လာမှုများပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြစဉ်တွင်, သက်သေအထောက်အထားတိုးတစ်ခုစွဲအဖြစ် CSBs များ၏ဖော်ပြချက်ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါကသက်သေအထောက်အထားမျက်နှာစာနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်ရှုထောင့်ကထောက်ခံစွဲ-related neuroplasticity အတွက်အာရုံခံ receptor ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏တစ်ဦးဖြစ်ပေါ်နေသောနားလည်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒီအစွဲလမ်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်ရရှိသည့်အရှိန်အသစ်အဆန်းနှင့် '' supranormal လှုံ့ဆော်မှု '(Nikolaas Tinbergen ်တီထွင်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ) အချက်အားဖြင့် amplified စေခြင်းငှါ ... ။
ဒါဟာအစားအသောက်စွဲလမ်းအဝလွန်ခြင်းအတွက် dopaminergic အဲဒီ receptor downregulation သရုပ်ပြလေ့လာမှုများ (ဝမ် et al ရှိနေသော်လည်းတစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲအဖြစ်ထည့်သွင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့အံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ , 2001), Reverse နှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း (BMI) (သံမဏိ et al ၏ Diet နှင့်ပုံမှန်နှင့်အတူမြင်ကြ။ , 2010) ။ Nikolaas Tinbergen ရဲ့သက်တမ်း (Tinbergen, သွန်းလောင်းပေးမယ့် '' supranormal နှိုးဆွ '' ၏အယူအဆ, 1951), မကြာသေးမီကလည်းအစားအစာစွဲ၏အဓိကအချက် (Lenoir, Serre, Laurine, & Ahmed က, ထောက်ခံသောကျော်လွန်ပြင်းထန်သောချို၏အခြေအနေတွင်ဖော်ပြထားခဲ့သည် 2007) ။ Tinbergen မူလကငှက်, လိပ်ပြာနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များအထူးသတိရစ္ဆာန်ရဲ့သာမန်ကြက်ဥနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်ထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုပေါ်လာဖို့ဒီဇိုင်းအတုအစားထိုးပိုနှစ်သက်သို့ duped နိုင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အစားအစာစှဲဖို့နှိုင်းယှဉ်ပါကလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏လေ့လာမှုမှာနှိုင်းယှဉ်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအလုပ်၏မရှိခြင်း, သင်တန်း၏, သည်, သို့သော်ဤအအပြုအမူတွေကိုအသီးအသီး supranormal လှုံ့ဆော်မှုပါဝင်ပတ်သက်နေနိုင်သည်ဟုစောဒကတက်နိုင်ပါတယ်။ Deirdre Barrett (2010) တစ်ဦး supranormal လှုံ့ဆော်မှု၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ညစ်ညမ်းပါဝင်သည်ထားပါတယ် ... ..
ညစ်ညမ်းတဲ့အစွမ်းထက်အပျော်အပါးမက်လုံးပေး drive ကိုအတူ fused ဝတ္ထုသင်ယူမှုဒီလိုမျိုးတစ်စုံလင်သောဓာတ်ခွဲခန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအာရုံစိုက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ကလစ် နှိပ်. , စုံလင် masturbatory ဘာသာရပ်ရှာဖွေနေ, neuroplastic သင်ယူမှုအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာက '' supranormal လှုံ့ဆော်မှု '(Tinbergen ၏ Tinbergen ရဲ့အယူအဆ၏ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်, 1951), Tinbergen နှင့် Magnus ရဲ့သူတွေဟာတိုးမြှင့်အမျိုးသမီးလိပ်ပြာမော်ဒယ်များကဲ့သို့တူညီသောရည်ရွယ်ချက််ထမ်းဆောင်လူသားတွေအတွက်အဆမဲ့အသစ်အဆန်းအတွက်တင်ပြပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်-တိုးမြှင့်ရင်သားနှင့်အတူ; တစ်ဦးချင်းစီမျိုးစိတ်များ၏အထီး, အသဘာဝကျကျပြောင်းလဲ (Magnus ဖို့အတုပိုနှစ်သက် 1958; Tinbergen, 1951) ။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရပိုမိုကောင်းမွန်သောအသစ်အဆန်းသည်ဥပမာအားဖြင့်ပြောရလျှင်ပိုးမွှားများကဲ့သို့သောအမျိုးသားများအတွက် pheromone ကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည် 'တိမ်းညွတ်မှုကိုဟန့်တားနေသော' နှင့် 'လေထုထဲကို ၀ င်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်လိင်အကြားအကြိုမိတ်လိုက်ဆက်သွယ်မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း' (Gaston, Shorey, & Saario, 1967) ... ..
တောင်မှအများပြည်သူထင်မြင်ချက်ကိုနောမိ Wolf ကနေဒီကြေညာချက်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့, ဒီဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြရန်ကြိုးစားနေပုံရပါတယ်, '' လူ့သမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ရုပ်တုဆင်းတု '' အာဏာနှင့်သှေးဆောငျကိုမှန်ကန်ကိုယ်လုံးတီးအမျိုးသမီး၏လှညျ့ စား. နိုငျပါပွီ။ ယနေ့တွင်မှန်ကန်အဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးတွေပဲမကောင်းတဲ့ညစ်ညမ်း '(Wolf ကဖြစ်ကြောင်း, 2003) ။ Tinbergen နှင့် Magnus ရဲ့ '' လိပ်ပြာ porn '' ကိုအောင်မြင်စွာအစစ်အမှန်အမျိုးသမီး၏ကုန်ကျစရိတ် (Magnus မှာအထီးအာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့်အဖြစ် 1958; Tinbergen, 1951), ကျနော်တို့လူသားတွေအတွက်ဖြစ်ပေါ်ဒီတူညီတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပါ။
4) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
3.2 ။ Supernormal လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ
ပွဲတစ်ပွဲ, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏လယ်ပြင်တွင်အရေးအပါဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွှမ်းမိုးနှင့်လွယ်ကူချောမွေ့သောလမ်းဖြစ်၏  ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ပြောင်းလဲတစ်ခုခုတစ်ဦးပုံကြီးချဲ့အတု "ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ" မှတဆင့် streaming Unlimited high-definition လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများ, ယခုကွန်ပျူတာများ, Tablet နှင့်စမတ်ဖုန်းများကနေတစ်ဆင့် 24 ဟက်တာနေ့ကအခမဲ့နှင့်ကျယ်ပြန့်သုံးစွဲနိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းတဲ့ supernormal လှုံ့ဆော်မှုဥပဒေကြောင်းအကြံပြုထားသည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် salience ၏လိုက်စား [74,75] ။ လိင် [ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာလှည့်ပတ်ခဲ့ပေမယ့် (1) ကဗီဒီယိုညစ်ညမ်းသိသိသာသာပိုပြီးလိင်နှိုးဆွသောညစ်ညမ်း၏အခြားပုံစံများကိုထက်76,77] သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ် ; (2) ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်ယောင် [အလားအလာဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက်မှအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် arousal မျိုးဆက်ပွားကြံ့ခိုင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖြစ်ကောင်းကြောင့်၎င်း, အကျွမ်းတဝင်ပစ္စည်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်, သာ. ကြီးမြတ် arousal ဖြစ်ပေါ်ဖို့ပိုမိုမြန်ဆန်သုတ်ရည်လွှတ်ပြနှင့်ပိုပြီးသုတ်ရည်များနှင့်စိုက်ထူလှုပ်ရှားမှုပြီ75,79,80,81,82,83,84]; နှင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူ Self-select လုပ်ပါပစ္စည်းမှ (3) စွမ်းရည် [Pre-မရွေး collection များကိုထက်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းပိုပြီး arousal စေသည်79] ။ တစ်ဦးကညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူကိုထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်အရှိန်မြင့်လိင်စိတ်နိုးထချက်ချင်းတစ်ဝတ္ထုမြင်ကွင်းတစ်ခုမှနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, ဗွီဒီယိုအသစ်သို့မဟုတ်အမျိုးအစားကြုံတွေ့ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ခိုင်ခံ့သည့်သဘာဝဆုလာဘ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်၏တစ်မူထူးခြားတဲ့ Active လုပ်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ ( သာ. ကြီးမြတ်တန်ဖိုးနှောင့်နှေးဆုလာဘ်ကျော်ချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်ရွေးချယ်ရာတွင်) ပြည်နယ်များ "ဟု The စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်းများနှင့်အရေးပိုဝနှောင့်နှေးအပေါ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်တစ်ဦးက 2015 လေ့လာမှု။ ... ဒါဟာ "ဆုလာဘ်, Impulse နှင့်စွဲလေ့လာမှုများအတွက်ထူးခြားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ညစ်ညမ်းဆက်ဆံဖို့ထို့ကြောင့်အရေးကြီးပါတယ်  (စစ။ 1, 10) ။
အသစ်အဆန်း [အဖြစ်အဓိကက register လုပ်သွားဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်လှုံ့ဆျောမှု, လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရေရှည်တည်တံ့ထားပါတယ်85] ။ ဒါကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုလာဘ်များနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးနှောက်၏ဒေသများတွင် dopamine ၏ပြီးတော့ Activision နေတာကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများလိုပဲအသစ်အဆန်း [ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်66] ။ compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက်ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေများအတွက်ပိုမိုအားကောင်း preference ကိုပြသနေစဉ်, သူတို့ရဲ့ dACC (dorsal anterior cingulate cortex) ကိုလည်း [ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက်ပုံရိပ်တွေကိုပိုမိုလျင်မြန်လေ့ကိုပြသ86] ပို. ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအဘို့အရှာဖွေရေးပိုဆိုး။ Co-စာရေးဆရာ Voon compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်အသစ်အဆန်းများနှင့်လေ့အပေါ်သူမ၏အဖွဲ့သည်ရဲ့ 2015 လေ့လာမှုအကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း "အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၏ထင်ရသောအဆုံးမဲ့ထောက်ပံ့ရေးကြောင့် ပို. ပို. ခက်ခဲမှလွတ်မြောက်ရန်အောင်, စွဲ [အနေနဲ့အစာကျွေးနိုင်ပါတယ်]"  ။ Mesolimbic dopamine လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း [မကြာခဏအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းထိုကဲ့သို့သောမျှော်လင့်ချက်များချိုးဖောက်ခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း, ဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်ခြင်း, (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသကဲ့သို့) / surfing ရှာကြံ၏လုပ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်အပိုဆောင်းဂုဏ်သတ္တိများအားဖြင့်တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်88,89,90,91,92,93] ။ လိင်စိတ်နိုးထတိုးမြှင့်ပြသထားပြီးဖြစ်သောစိုးရိမ်စိတ် [89,94] လည်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူလိုက်ပါလာလိမ့်မည်။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအဖြစ်အဓိကမှတ်ပုံတင်ရန်သောဤအရည်အသွေးတွေ, အပေါငျးတို့သကမ်းလှမ်း dopamine ပြီးတော့ Activision နေတာကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း, လိင်စိတ်နိုးထမြှင့်တင်ရန်။
Prause et al ။, 2017 စွဲပုံစံကိုနားမလည်ပါဘူး
PRAUSE et al: ဒါ့အပြင်ဒေတာ compulsive နှင့်ထကြွလွယ်သောမော်ဒယ်များအကြားခွဲခြားရန်လုံလောက်သောမရှိကြပေ။
နောက်ထပ်အနီရောင် herring ။ ၏စာရေးဆရာများမတူဘဲ Potenza et al ။ , ၏စာရေးဆရာများ Prause et al ။, စွဲကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ် - ကပြသထားတယ်။ လေ့လာမှုများကစွဲလမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းများပါရှိသည်ကြောင်းထပ်တလဲလဲဖော်ပြသည် နှစ်ခုလုံး Impulse နှင့် compulsive ။ အဘို့ (က Google Scholar ရှာဖွေရေး စွဲ + Impulse + compulsive 22,000 ကားအညွှန်းပြန်လည်ရောက်ရှိ။ ) ဤတွင်၏ရိုးရှင်းအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ် ထကြွလွယ်သော နှင့် အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော:
ထကြွလွယ်သော: ပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုံလောက်သောအတွေးသို့မဟုတ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းမရှိဘဲခေတ္တ။ ပိုကြီးတဲ့နှောင့်နှေးဆန္ဒပြည့်နှင့်ကရွေ့လျားမှုအတွက်သတ်မှတ်ထားရဲ့တစ်ချိန်ကဆန္ဒပြည့်ဆီသို့တစ်ဦးအမူအကျင့်ကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကျော်သေးငယ်ချက်ချင်းဆုလာဘ်ကိုလက်ခံဖို့တစ်ဦးကဓာတ်။
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော: အချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရသိရသည်ဖျော်ဖြေသို့မဟုတ်တစ်ပုံစံဖက်ရှင်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤရွေ့ကားအပြုအမူတွေကိုပင်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ၏မျက်နှာကို၌စှဲမွဲ။
ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆ, စွဲသုတေသီများ မကြာခဏစွဲသွင်ပြင်လက္ခဏာများ ကနေဖွံ့ဖြိုးဆဲအဖြစ် ထကြွလွယ်သော ရန်အပျော်အပါး-ရှာကြံအပြုအမူ compulsive ထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေ (ထိုကဲ့သို့သောဆုတ်ခွာ၏နာကျင်မှုကဲ့သို့) အီကိုရှောင်ကြဉ်ရန်။ ထို့ကြောင့်, စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးအနည်းငယ်ပါဝင်သည်အခြားဒြပ်စင်များနှင့်အတူ။ ဒါကြောင့်သူတို့က CSBD ဆက်စပ်အဖြစ် Impulse နှင့် compulsive ၏ "မော်ဒယ်များ" အကြားဘာသာဂုဏ်ထူးအတန်ငယ်အတုဖြစ်ကြသည်။
သစ်ကို ICD-11 ရောဂါမှာ "compulsive" ၏အသုံးပြုမှုကို compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder ရဲ့အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံပြုဖျောညှနျးဖို့ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်: "ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆက်ပြောသည်။"ဟုအဆိုပါ ICD-11 များတွင်အသုံးပြုအဖြစ်နှစ်ပေါင်းအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြရန်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး, မကြာခဏနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖလှယ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်" စွဲ။ "(ဥပမာတစ်ခုက Google ပညာရှင်ရှာဖွေရေး," မယ့်အစား "compulsive မလှူ + စွဲ ပြန်ကားအညွှန်း 130,000 ။ )
ထို့ကြောင့်သမျှ သငျသညျ "hypersexuality", "porn စွဲ," "လိင်စွဲလမ်း", "Out-of-ထိန်းချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ," "ဘာစွဲ" - - ထိုအပြုအမူကို "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder 'အတွင်းတွင်လဲလျှင်သို့မဟုတ်သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခေါ်ချင် ဖော်ပြချက်, ထိုအခြေအနေ ICD-11 CSBD ရောဂါသုံးပြီးရောဂါနိုင်ပါသည်။